Shwe Khit - Page 457 of 471 - Media and Entertainment
2020 ခုနှဈ (6)လပိုငျးအတှကျ ခုနှဈရကျသားသမီး တဈလစာဟောစာတမျး
May 29, 2020 by Zaw Hein
စီးပှားရေး၊ အလုပျအကိုငျနှငျ့ပတျ သကျပွီး လူမြိုးခွား၊ နိုငျငံခွားနှငျ့ ပတျသကျသော လုပျငနျး၊ အထညျအလိပျနှငျ့ပတျသကျသော လုပျငနျး၊ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှား လုပျငနျး၊ ပွညျပနှငျ့ပတျသကျသော လုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျကိနျး ရှိပါသညျ။
ငှရေေး၊ ကွေးရေး ကံမကောငျးသေးပါ။ ငှအေထှကျမြားခွငျး၊ ရစရာရှိတာမရခွငျး၊ ပေးစရာရှိတာ မပေးဖွဈသေး ခွငျး၊ အကွှေးတငျခွငျးမြား ကွုံရကိနျးရှိပါသညျ။ အလုပျအကိုငျပွောငျးရှခေ့ငျြ စိတျမြားဖွဈနတေတျပါသညျ။
အလုပျအကိုငျပွောငျးလိုလြှငျ ဤလကုနျ (2)ရကျနကြေ့ျောမှ ပွောငျးပါလေ။ ငယျရှယျသူမြား ခဈြသူနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈရတတျသညျ။ တနင်ျဂနှေ၊ တနင်ျလာ၊ သောကွာသား ခဈြသူရှိလြှငျ အဆငျမပွေ ပကျြသှားတတျပါသညျ။
အိမျထောငျရှိသူမြား အိမျထောငျဖကျနှငျ့ပတျသတျပွီး စိတျအနှောငျ့အ ယှကျဖွဈရ၊ စကားမြားရတတျပါသညျ။ အလုပျအကိုငျမြား အစဉျပွမေလိုလိုနှငျ့ အဆငျမပွဘေဲရှိနတေတျပါ သညျ။ အငျတာဗြူးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စမြား စီစဉျပွီး လုပျဖွဈရနျ ကွံကွာနတေတျပါသညျ။
ယတွာအနနှေငျ့ တနင်ျဂနှနေေ့ အိမျဘုရားစဉျတှငျ ပနျးအဝါ(15)ပှငျ့ ဖယောငျးတိုငျ-အဝါယောငျ(15)တိုငျ အမှေးတိုငျ(15)တိုငျ အသီး(15)လုံးကို ကပျလှူထှနျးညှိပူဇျောပေးလိုကျပါ။ ရောငျးလိုသော ပစ်စညျးမြားရှိလြှငျ အုနျးညှနျ့ (၁၂) ညှနျ့နှငျ့ရိုကျပွီး ဆုတောငျးပါ။
မြှျောလငျ့ခကျြမြားပွီးပွညျ့စုံမညျ့ကာလဖွဈသညျ။ မိမိဖွဈခငျြသောအရာမှနျသမြှ ယခုကာလအတှငျးထူးခွားတိုကျဆိုငျစှာ ပွညျ့ဝတကျသညျ။လုပျဆောငျမှုတိုငျး၌ စိတျပါလကျပါရှိပါစေ။
အဆောကျအဦးနှငျ့ပတျသကျသော လုပျငနျး၊ တိုကျတာဆောကျလုပျခွငျး၊ အိမျသဈဆောကျလုပျခွငျး၊ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျး၊ မွယောနှငျ့ပတျ သကျသောလုပျငနျး၊ ပှဲစားလုပျငနျး၊ ပှဲရုံလုပျငနျး၊ အောငျမွငျကိနျးရှိပါသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့လမြားမရခဲ့သော ရစရာရှိ သောငှမြေား ဆုံးရှုံးသှားသောငှမြေားနှငျ့ရှမြေားပွနျလညျရရှိ ကိနျးရှိသညျ။ မထငျမှတျဘဲ ဘုရားဖူးခရီး၊ ရပျဝေးခရီးသှားရကိနျးလညျး ရှိပါသညျ။
ရပျဝေးမှ ဆှမြေိုးသား ခငျြး မြားနှငျ့လညျးတှရေ့ကိနျးရှိပါ သညျ။ စကျပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျလို့ ငှကွေေးကုနျကမြားရတတျပါသညျ။ ငှအေထှကျမြားတတျပါသညျ။ ငှပြေောကျကိနျးရှိသညျ။
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ သ၊ ဟ အက်ခရာအမညျနှငျ့စသောသူ မြားကိုငှရေေးကွေးရေးကိစ်စ သတိထားပါ၊ အာမခံနှငျ့ငှမေခြးပါနှငျ့။ အိမျထောငျရှငျမမြား အိမျထောငျရေးအဆငျပွပွေီး အိမျထောငျရှငျအမြိုးသားမြား ဆနျးပှငျ့ကိနျးရှိသော ကာလဖွဈပါသညျ။
ခဈြသူ သမီးရညျးစားမြား ခဈြသူနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ တနင်ျလာ၊ သောကွာ သားသမီးမြားနှငျ့ ခဈြသူဖွဈလြှငျ အဆငျမပွဖွေဈပွီး ပွတျသှားတတျပါသညျ။ ပညာရေး ကံကောငျးပါသညျ။ သငျတနျးတတျရနျ စိတ်ကူးရှိသူများ သငျတနျးတတျဖွဈတတျသညျ။
အငျတာဗြူး ဖွမေညျ့သူမြား အောငျမွငျ ကိနျးရှိသညျ။ တဈခါတဈရံ အိမျမှာမနလေိုစိတျ၊ ခရီးထှကျခငျြစိတျမြား ဖွဈနတေတျသညျ။
ယတွာအနနှေငျ့ မိမိ၏ မှေးနံဂွိုလျဒေါငျ့ဘုရားမှာ ကှမျးရှကျ(5)ရှကျ, ဖယောငျးတိုငျအဖွူရောငျ (5)တိုငျ, ပနျးအဖွူရောငျ(5)ပှငျ့ကို ကပျလှူပူဇျောပေးပါ။
ဘာပဲလုပျလုပအပငျပနျးခရသလောကျ အကြိုးမပေးတကျတဲ့ကာလဖွဈသညျ။ စိတျရှုပျစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတျဓာတျကစြရာကိစ်စမြားကွုံတတျသညျ။ သူတဈပါး အထငျလှဲခွငျး၊ မကောငျးပွောခငျြးမြား ခံရကိနျးရှိသညျ။
ခဈြခငျသူမြားနှငျ့မထငျမှတျသာ အကွောငျးအရာမြားကွောငျ့ လမျးခှဲရကိနျးရှိပါသညျ။ တနင်ျလာ၊ အင်ျဂါ၊ ဗုဒ်ဓဟူး ချစ်သူရှိက မထငျမှတျဘဲ အဆငျမပွခွေငျး၊ ပကျြသှားခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ချစ်သူမရှိသူများကတော့ အခဈြသဈတှမေ့ညျ၊။ မိမိထကျငယျရှယျသူမြားနှငျ့အဆငျပွတေတျပါသညျ။
အိမျထောငျရှိသူမြား၊ အိမျထောငျ ရေးအဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ ဆနျးပှငျ့ခွငျးတို့ကွုံရကိနျးရှိသညျ။ ပညာရေးကံကောငျးပါသညျ။ သငျတနျးကိစ်စ၊ အငျတာဗြူးကိစ်စမြားအဆငျပွေ အောငျမွငျကိနျးရှိပါသညျ။ ငှရေေး၊ ကွေးရေးကံမကောငျးပါ။
အကွှေးတငျခွငျး၊ အကွှေးပေးစရာရှိခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ငှရေေးကွေးရေးနှငျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး သောကရောကျကိနျးရှိပါသညျ။ အလုပျအကိုငျမြားလညျး အဆငျပွမေလိုလိုနှငျ့အဆငျမ ပွဖွေဈတတျသညျ။
နိုငျငံခွားလုပျငနျး၊ လူမြိုးခွားနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျး၊ အစိုးရနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးမြား အောငျမွငျကိနျးရှိပါသညျ။ ငှကွေေးနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျး၊ စကျပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးလုပျသူမြား ငှကွေေးကံကောငျးမှုအားနညျးတတျပါသညျ။
ယတွာကတော့ ဒီလအတှငျးငှရေေးကွေးရေး ကံကောငျးစရေနျ ဘုရား တဈဆူဆူရဲ့ တနင်ျဂနှထေောငျ့မှာ သင်ျဘောသီး(1)လုံးလှူပေးပါ။ အိမ်ဘုရားမှာ သပွပေနျးလှူပေးပါ
ရညျရှယျခကျြ ရညျမှနျးခကျြမြား ထငျထငျရှားရှား အောငျမွငျမညျ့ကာလဖွဈသညျ။ ငှကွေေးကုနျကမြားခွငျး၊ အဖေ၊ အမေ ကနျြးမာရေးညံ့ခွငျးမြားကွုံရတတျပါသညျ။ ခဈြခငျသောသူမြားနှငျ့လညျးလမျးခှဲရတတျပါသညျ။ ခဈြသူ အသဈတှလေို့ စိတျခံစားရကိနျးရှိပါတယျ။
အခဈြရေး ငှကွေေး ဒီလ ထဲကံကောငျးသေးပါ။ အ၀ငျနဲ့ အထှကျ ငှကွေေး အထှကျမြားရတတျပါတယျ။ ခြေးထားသောငှမြေားပွနျမရခွငျး၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ငှကေုနျကွေးကမြားခွငျးမြားကွုံရတတျပါသညျ။
တနင်ျလာ၊ ကွာသပတေးသားသမီးကို ငှမေခြေးပါနဲ့ ။ အိမျကိစ်စ၊ အဆောကျအဦးကိစ်စမြား၊ ဆိုငျခနျးကိစ်စမြား အဆငျပွအေောငျမွငျမညျ။ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ စကျပစ်စညျး၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျကိနျးရှိသော ကာလဖွဈပါသညျ။
ဒီလအတှငျး အခဈြရေးကံမကောငျးပါ။ မိနျးမတဈယောကျကို အကွောငျးပွုပွီးခဈြသူနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈကာ လမျးခှဲရကိနျး ကွုံရတတျပါသညျ။ တဈခါတဈရံ စိတျအားငယျသလို ဖွဈနတေတျသညျ။
အိမျထောငျရှိသူမြား သား၊သမီးရကိနျးရှိပါသညျ။ ပညာရေးကံမကောငျးပါ၊ သငျတနျးတတျရနျ ကိစ်စမြားပကျြသှားကိနျးရှိသညျ။
ယတွာကတော့ မိမိထကျ(၃)နှဈအသကျကွီးသောတဈဦးကို အကငြ်္ီ အဖွူရောငျအသဈ(1)ထညျလှူပေးလိုကျပါ။ အိမျဘုရားမှာ နှငျးဆီပနျး အနီရောငျ(၁၇)ပှငျ့ လှူပေးလိုကျပါ။
လကျရှိလုပျနသေော လုပျငနျးအား မိတျဆှသေူငယျခငျြးတဈဦးကွောငျ့ နှောငျနှေးပွီး လှဲခြျောတကျသော့ကာလဖွဈသညျ။ ခွေ၊ လကျထိမိခိုကျမိ ဖွတျတတျသဖွငျ့ ဂရုစိုကျပေးပါ ။စိတျထိခိုကျခွငျး၊ စိတျဓာတျကခြွငျးမြား တဈခါတဈရံဖွဈပျေါတတျပါသညျ။
ခဈြသူနှငျ့စကားပွောအဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ မထငျမှတျဘဲ ခရီးတဈခုသှားရတတျသညျ။ ခရီးသှားပွီးပွနျ လာလြှငျ ညံ့နသေောကံမြားကောငျး သှားတတျပါသညျ။ မွကေိစ်စ၊ ဖုနျးကိစ်စ၊ အမှကေိစ်စ၊ ငှရေေးကွေးရေးနှငျ့ပတျ သကျပွီး စိတျသောကရောကျရတတျပါသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ငှအေထှကျမြားခွငျး၊ ငှကွေေးပေး စရာရှိသညျကို မပေးနိုငျခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ကား၊ ကှနျပြူတာ၊ ကငျမရာမြား ၀ငျကိနျး၊ အဆငျပွကေိနျး ရှိသညျ။ အလှပွငျလုပျငနျး၊ အနုပညာလုပျငနျး၊ လူထုနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျကိနျး ရှိပါသညျ။
စပျတူရှယျယာလုပျငနျး၊ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျးမြား အလုပျဖွဈပွီး ငှမေကနျြခွငျး၊ ငှစေုမရခွငျး မြားကွုံရတတျပါသညျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျသူမြား ငှရေေးကွေးရေးစကားပွောရတတျသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား ဆနျးပှငျ့ကိနျးရှိသညျ။ ပညာရေးကံမကောငျးပါ။ သငျတနျးတတျရနျကိစ်စမြား ပကျြသှားတတျပါသညျ။
ယတွာကတော့ အိမျဘုရားမှာ ပနျးအဖွူရောငျ(19)ပှငျ့ ဆီမီးခှကျ(19)ခှကျ,အမှေးတိုငျ(19)တိုငျ ကပျလှူထှနျးညှိပူဇျောပေးလိုကျပါ။
အလှနျကောငျးတဲ့သတငျးတဈခုကွားရတကျပါသညျ လူခဈြလူခငျမြားမဲ့ကာလဖွဈမညျ။ စကျပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျသော လုပျငနျး၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျး၊ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး၊ ပွညျပရငျးနှီးမှုလုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျ ကိနျးရှိပါသညျ။
ရပျဝေးမှစပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြားလညျး ပျေါတတျပါသညျ။ ပှဲရုံပှဲစားလုပျငနျး၊ မွယောနှငျ့ပတျ သကျသောလုပျငနျး၊ ပရိဘောဂနှငျ့ ပတျသကျသောလုပျငနျး၊ ပဲမြိုးစုံရောငျးဝယျရေး စသော ကွာသပတေးနံလုပျငနျးမြားလညျး အဆငျပွအေောငျမွငျတတျသော ကာလဖွဈပါသညျ။
ငှကွေေးအ၀ငျနညျး၊ အထှကျကွမျး ဖွဈနတေတျပါသညျ။ မထငျမှတျဘဲ ခရီးသှားရတတျပါသညျ။ ကောငျးသောခရီးဖွဈတတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား အိမျထောငျဖကျနှငျ့ပတျသကျပွီး စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရတတျသညျ။
အိမျထောငျဖကျသညျ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျခွငျး/ အိမ်က ထှကျသှားခွငျး စနျးပှငျ့ခွငျးတို့ဖွဈ ၍စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရတတျပါသညျ။
ရပျဝေးမှမိတျဆှေ ဆရာသမား ၊ အင်ျဂါ၊ စနေသားသမီးများ အကူ အညီရတတျပါသညျ။ ငယျရှယျသူမြားခဈြသူနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈကိနျးရှိသညျ။ တဈခါတဈလေ စိတ်ထိခိုက်သလို စိုးရိမ်သလို စိတျသောကဖွဈနတေတျပါသညျ။
ပညာရေးကိစ်စ၊ အထူးကောငျးပါသညျ။ သငျတနျးကိစ်စမြားလညျး အဆငျပွအေောငျမွငျပွီး သငျတနျးတတျရနျ ရညျရှယျထားသာမြား သငျတနျးတတျဖွဈလိမျ့မညျ။ ဒီကာလအ တှငျး စိတျညဈ၊ စိတျရှုပျလြှငျ ဘုရားဖူးခရီးထှကျလိုကျပါ။
ယတွာကတော့ တနင်ျလာဂွိုလျဒေါငျ့ဘုရားတှငျ ကံ့ကျောညှနျ့(21)ညှနျ့, ဖယောငျးတိုငျ(21)တိုငျ ခြိုခဉျြ(သကွားလုံး) (21)လုံး လှူပေးလိုကျပါ။
မထငျမှတျထားသော လုပျငနျး နရော အပွောငျးအလဲမြား ပွောငျးရှလေု့ပျကိုငျရမညျ့ ကာလဖွဈသညျ၊၊ အလုပျအကိုငျတိုးတတျမှုအားကောငျးတတျပါသညျ။ ငှကေုနျကွေးကမြားနတေတျသညျ။
ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျး၊ ဘာသာပွနျလုပျငနျး၊ လူထုနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျး၊ အနုပညာလုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျကိနျးရှိသော ကာလဖွဈပါသညျ။ မိတျရငျး၊ ဆှရေငျး၊ဆရာသမားလို ပုဂ်ဂိုလျမြိုးနှငျ့ အဆငျမပွေ ဖွဈကိနျးရှိသညျ။
ခွေ၊ လကျ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျး၊ ကနျြးမာရေးညံ့၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးပွရခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှငျ အမြိုးသမီးမြား အိမျထောငျ ဖကျဆနျးပှငျ့ခွငျး၊ အိမျထောငျဖကျနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈခွငျးမြား ကွုံရတတျသညျ။
အိမျထောငျရှငျအမြိုးသားမြား ဆနျးပှငျ့ကိနျးရှိပါသညျ။ ရညျစားရှိသူမြားအခဈြရေး အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ တနင်ျဂနှေ၊ ကွာသပတေးသားသမီးနှငျ့ ဇာတျလမျးဖွဈ လြှငျပွတျသှားတတျပါသညျ။ အလုပျအကိုငျ အဆငျပွမေလိုလိုနှငျ့ မပွဘေဲလှဲလှဲနတေတျပါသညျ။
၀ငျစရာရှိ သောငှမြေားလညျး မ၀ငျခွငျး၊ ရစရာရှိသောလုပျငနျးမြား လညျးမအောငျမွငျသေးခွငျးမြားကွံရတတျသညျ။ စနေ၊ တနင်ျဂနှသေား ခဈြသူအိမျထောငျဖကျဖွဈလြှငျ ဖောကျပွနျ၍ ကှဲသှားတတျသောကာလဖွဈပါသညျ။ ပညာ ရေးကံမကောငျးပါ။
သငျတနျးမြား တိုးလို့တနျးလနျး ဖွဈနတေတျသညျ။ စိတျညဈလြှငျ ရပျဝေးခရီးထှကျခွငျး၊ ဘုရားဖူးထှကျခွငျး၊ ညအိပ်ညနေခရီးများ ထှကျလိုကျပါ။ ခရီးမှာပွနျလာလြှငျ ညံ့နသေောကံမြားကောငျးသှား လိမျ့မညျ။
ယကွာကတော့ ကွသပတေးဂွိုလျဒေါငျ့ဘုရားတှငျ အသီး(19)လုံး ရှကျလှ(19)ညှနျ့ , ဖယောငျးတိုငျအနီရောငျ(19) တိုငျကို ထှနျးညှိပူဇျောပေးပါ၊၊
2020 ခုနွစ် (6)လပိုင်းအတြက် ခုနွစ်ရက်သားသမီး တစ္လစာဟောစာတမ်း
စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ် သက်ပြီး လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ ပြည်ပနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။
ငွေရေး၊ ကြေးရေး ကံမကောင်းသေးပါ။ ငွေအထွက်များခြင်း၊ ရစရာရှိတာမရခြင်း၊ ပေးစရာရှိတာ မပေးဖြစ်သေး ခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်းများ ကြုံရကိန်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့ချင် စိတ်များဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလိုလျှင် ဤလကုန် (2)ရက်နေ့ကျော်မှ ပြောင်းပါလေ။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာသား ချစ်သူရှိလျှင် အဆင်မပြေ ပျက်သွားတတ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်ရ၊ စကားများရတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များ အစဉ်ပြေမလိုလိုနှင့် အဆင်မပြေဘဲရှိနေတတ်ပါ သည်။ အင်တာဗျူးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စများ စီစဉ်ပြီး လုပ်ဖြစ်ရန် ကြံကြာနေတတ်ပါသည်။
ယတြာအနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ အိမ်ဘုရားစဉ်တွင် ပန်းအဝါ(15)ပွင့် ဖယောင်းတိုင်-အဝါယောင်(15)တိုင် အမွှေးတိုင်(15)တိုင် အသီး(15)လုံးကို ကပ်လှူထွန်းညှိပူဇော်ပေးလိုက်ပါ။ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်းများရှိလျှင် အုန်းညွန့် (၁၂) ညွှန့်နှင့်ရိုက်ပြီး ဆုတောင်းပါ။
မျှော်လင့်ချက်များပြီးပြည့်စုံမည့်ကာလဖြစ်သည်။ မိမိဖြစ်ချင်သောအရာမှန်သမျှ ယခုကာလအတွင်းထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာ ပြည့်ဝတက်သည်။လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း၌ စိတ်ပါလက်ပါရှိပါစေ။
အဆောက်အဦးနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ တိုက်တာဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အိမ်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မြေယာနှင့်ပတ် သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ပွဲရုံလုပ်ငန်း၊ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများမရခဲ့သော ရစရာရွိ သောငွေများ ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများနှင့်ရွှေများပြန်လည်ရရှိ ကိန်းရှိသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ဘုရားဖူးခရီး၊ ရပ်ဝေးခရီးသွားရကိန်းလည်း ရှိပါသည်။
ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးသား ချင်း များနှင့်လည်းတွေ့ရကိန်းရှိပါ သည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်လို့ ငွေကြေးကုန်ကျများရတတ်ပါသည်။ ငွေအထွက်များတတ်ပါသည်။ ငွေပျောက်ကိန်းရှိသည်။
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ သ၊ ဟ အက္ခရာအမည်နှင့်စသောသူ များကိုငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ သတိထားပါ၊ အာမခံနှင့်ငွေမချးပါနှင့်။ အိမ်ထောင်ရှင်မများ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေပြီး အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများ ဆန်းပွင့်ကိန်းရှိသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူ သမီးရည်းစားများ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ တနင်္လာ၊ သောကြာ သားသမီးများနှင့် ချစ်သူဖြစ်လျှင် အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ပြတ်သွားတတ်ပါသည်။ ပညာရေး ကံကောင်းပါသည်။ သင်တန်းတတ်ရန် စိတ္ကူးရွိသူမ်ား သင်တန်းတတ်ဖြစ်တတ်သည်။
အင်တာဗျူး ဖြေမည့်သူများ အောင်မြင် ကိန်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်မှာမနေလိုစိတ်၊ ခရီးထွက်ချင်စိတ်များ ဖြစ်နေတတ်သည်။
ယတြာအနေနှင့် မိမိ၏ မွေးနံဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားမှာ ကွမ်းရွက်(5)ရွက်, ဖယောင်းတိုင်အဖြူရောင် (5)တိုင်, ပန်းအဖြူရောင်(5)ပွင့်ကို ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
ဘာပဲလုပ်လုပအပင်ပန်းခရသလောက် အကျိုးမပေးတက်တဲ့ကာလဖြစ်သည်။ စိတ်ရှုပ်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကိစ္စများကြုံတတ်သည်။ သူတစ်ပါး အထင်လွှဲခြင်း၊ မကောင်းပြောချင်းများ ခံရကိန်းရှိသည်။
ချစ်ခင်သူများနှင့်မထင်မှတ်သာ အကြောင်းအရာများကြောင့် လမ်းခွဲရကိန်းရှိပါသည်။ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ခ်စ်သူရွိက မထင်မှတ်ဘဲ အဆင်မပြေခြင်း၊ ပျက်သွားခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ခ်စ်သူမရွိသူမ်ားကေတာ့ အချစ်သစ်တွေ့မည်၊။ မိမိထက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့်အဆင်ပြေတတ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှိသူများ၊ အိမ်ထောင် ရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ဆန်းပွင့်ခြင်းတို့ကြုံရကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးကံကောင်းပါသည်။ သင်တန်းကိစ္စ၊ အင်တာဗျူးကိစ္စများအဆင်ပြေ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးကံမကောင်းပါ။
အကြွေးတင်ခြင်း၊ အကြွေးပေးစရာရှိခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သောကရောက်ကိန်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များလည်း အဆင်ပြေမလိုလိုနှင့်အဆင်မ ပြေဖြစ်တတ်သည်။
နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်း၊ လူမျိုးခြားနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ငွေကြေးကံကောင်းမှုအားနည်းတတ်ပါသည်။
ယတြာကတော့ ဒီလအတွင်းငွေရေးကြေးရေး ကံကောင်းစေရန် ဘုရား တစ်ဆူဆူရဲ့ တနင်္ဂနွေထောင့်မှာ သင်္ဘောသီး(1)လုံးလှူပေးပါ။ အိမ္ဘုရားမွာ သပြေပန်းလှူပေးပါ
ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်များ ထင်ထင်ရှားရှား အောင်မြင်မည့်ကာလဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကုန်ကျများခြင်း၊ အေဖ၊ အေမ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။ ချစ်ခင်သောသူများနှင့်လည်းလမ်းခွဲရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူ အသစ်တွေ့လို့ စိတ်ခံစားရကိန်းရှိပါတယ်။
အချစ်ရေး ငွေကြေး ဒီလ ထဲကံကောင်းသေးပါ။ အ၀င်နဲ့ အထွက် ငွေကြေး အထွက်များရတတ်ပါတယ်။ ချေးထားသောငွေများပြန်မရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။
တနင်္လာ၊ ကြာသပတေးသားသမီးကို ငွေမချေးပါနဲ့ ။ အိမ်ကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စများ၊ ဆိုင်ခန်းကိစ္စများ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ စက်ပစ္စည်း၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်းရှိသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကံမကောင်းပါ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြုပြီးချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကာ လမ်းခွဲရကိန်း ကြုံရတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အားငယ်သလို ဖြစ်နေတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှိသူများ သား၊သမီးရကိန်းရှိပါသည်။ ပညာရေးကံမကောင်းပါ၊ သင်တန်းတတ်ရန် ကိစ္စများပျက်သွားကိန်းရှိသည်။
ယတြာကတော့ မိမိထက်(၃)နှစ်အသက်ကြီးသောတစ်ဦးကို အင်္ကျီ အဖြူရောင်အသစ်(1)ထည်လှူပေးလိုက်ပါ။ အိမ်ဘုရားမှာ နှင်းဆီပန်း အနီရောင်(၁၇)ပွင့် လှူပေးလိုက်ပါ။
လက်ရှိလုပ်နေသော လုပ်ငန်းအား မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ဦးကြောင့် နှောင်နှေးပြီး လွှဲချော်တက်သော့ကာလဖြစ်သည်။ ခြေ၊ လက်ထိမိခိုက်မိ ဖြတ်တတ်သဖြင့် ဂရုစိုက်ပေးပါ ။စိတ်ထိခိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းများ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ချစ်သူနှင့်စကားပြောအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ခရီးတစ်ခုသွားရတတ်သည်။ ခရီးသွားပြီးပြန် လာလျှင် ညံ့နေသောကံများကောင်း သွားတတ်ပါသည်။ မြေကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ၊ ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပတ် သက်ပြီး စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငွေအထွက်များခြင်း၊ ငွေကြေးပေး စရာရှိသည်ကို မပေးနိုင်ခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကင်မရာများ ၀င်ကိန်း၊ အဆင်ပြေကိန်း ရှိသည်။ အလှပြင်လုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း၊ လူထုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။
စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ငွေမကျန်ခြင်း၊ ငွေစုမရခြင်း များကြုံရတတ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ငွေရေးကြေးရေးစကားပြောရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ ဆန်းပွင့်ကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးကံမကောင်းပါ။ သင်တန်းတတ်ရန်ကိစ္စများ ပျက်သွားတတ်ပါသည်။
ယတြာကတော့ အိမ်ဘုရားမှာ ပန်းအဖြူရောင်(19)ပွင့် ဆီမီးခွက်(19)ခွက်,အမွှေးတိုင်(19)တိုင် ကပ်လှူထွန်းညှိပူဇော်ပေးလိုက်ပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုကြားရတက်ပါသည် လူချစ်လူခင်များမဲ့ကာလဖြစ်မည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင် ကိန်းရှိပါသည်။
ရပ်ဝေးမှစပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလည်း ပေါ်တတ်ပါသည်။ ပွဲရုံပွဲစားလုပ်ငန်း၊ မြေယာနှင့်ပတ် သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပဲမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေး စေသာ ကြာသပတေးနံလုပ်ငန်းများလည်း အဆင်ပြေအောင်မြင်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးအ၀င်နည်း၊ အထွက်ကြမ်း ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ခရီးသွားရတတ်ပါသည်။ ကောင်းသောခရီးဖြစ်တတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ဖက်သည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း/ အိမ္က ထွက်သွားခြင်း စန်းပွင့်ခြင်းတို့ဖြစ် ၍စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။
ရပ်ဝေးမှမိတ်ဆွေ ဆရာသမား ၊ အင်္ဂါ၊ စေနသားသမီးမ်ား အကူ အညီရတတ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကိန်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ္ထိခိုက်သလို စိုးရိမ်သလို စိတ်သောကဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
ပညာရေးကိစ္စ၊ အထူးကောင်းပါသည်။ သင်တန်းကိစ္စများလည်း အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီး သင်တန်းတတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသာများ သင်တန်းတတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီကာလအ တွင်း စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်လျှင် ဘုရားဖူးခရီးထွက်လိုက်ပါ။
ယတြာကတော့ တနင်္လာဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် ကံ့ကော်ညွန့်(21)ညွန့်, ဖယောင်းတိုင်(21)တိုင် ချိုချဉ်(သကြားလုံး) (21)လုံး လှူပေးလိုက်ပါ။
မထင်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်း နေရာ အပြောင်းအလဲများ ပြောင်းရွေ့လုပ်ကိုင်ရမည့် ကာလဖြစ်သည်၊၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတတ်မှုအားကောင်းတတ်ပါသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၊ လူထုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်းရှိသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ရင်း၊ ဆွေရင်း၊ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်ကိန်းရှိသည်။
ခြေ၊ လက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင် ဖက်ဆန်းပွင့်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများ ဆန်းပွင့်ကိန်းရှိပါသည်။ ရည်စားရှိသူများအချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ ကြာသပတေးသားသမီးနှင့် ဇာတ်လမ်းဖြစ် လျှင်ပြတ်သွားတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမလိုလိုနှင့် မပြေဘဲလွဲလွဲနေတတ်ပါသည်။
၀င်စရာရှိ သောငွေများလည်း မ၀င်ခြင်း၊ ရစရာရှိသောလုပ်ငန်းများ လည်းမအောင်မြင်သေးခြင်းများကြံရတတ်သည်။ စေန၊ တနင်္ဂနွေသား ချစ်သူအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လျှင် ဖောက်ပြန်၍ ကွဲသွားတတ်သောကာလဖြစ်ပါသည်။ ပညာ ရေးကံမကောင်းပါ။
သင်တန်းများ တိုးလို့တန်းလန်း ဖြစ်နေတတ်သည်။ စိတ်ညစ်လျှင် ရပ်ဝေးခရီးထွက်ခြင်း၊ ဘုရားဖူးထွက်ခြင်း၊ ညအိပ်ေညနခရီးမ်ား ထွက်လိုက်ပါ။ ခရီးမှာပြန်လာလျှင် ညံ့နေသောကံများကောင်းသွား လိမ့်မည်။
ယကြာကတော့ ကြသပတေးဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် အသီး(19)လုံး ရွက်လှ(19)ညွန့် , ဖယောင်းတိုင်အနီရောင်(19) တိုင်ကို ထွန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ် သက်ပြီး လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ ပြည်ပနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။
ငွေရေး၊ ကြေးရေး ကံမကောင်းသေးပါ။ ငွေအထွက်များခြင်း၊ ရစရာရှိတာမရခြင်း၊ ပေးစရာရှိတာ မပေးဖြစ်သေး ခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်းများ ကြုံရကိန်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့ချင် စိတ်များဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလိုလျှင် ဤလကုန် (2)ရက်နေ့ကျော်မှ ပြောင်းပါလေ။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာသား ချစ်သူရှိလျှင် အဆင်မပြေ ပျက်သွားတတ်ပါသည်။
ယတြာအနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ အိမ်ဘုရားစဉ်တွင် ပန်းအဝါ(15)ပွင့် ဖယောင်းတိုင်-အဝါယောင်(15)တိုင် အမွှေးတိုင်(15)တိုင် အသီး(15)လုံးကို ကပ်လှူထွန်းညှိပူဇော်ပေးလိုက်ပါ။ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်းများရှိလျှင် အုန်းညွန့် (၁၂) ညွှန့်နှင့်ရိုက်ပြီး ဆုတောင်းပါ။
မျှော်လင့်ချက်များပြီးပြည့်စုံမည့်ကာလဖြစ်သည်။ မိမိဖြစ်ချင်သောအရာမှန်သမျှ ယခုကာလအတွင်းထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာ ပြည့်ဝတက်သည်။လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း၌ စိတ်ပါလက်ပါရှိပါစေ။
ပြီးခဲ့သည့်လများမရခဲ့သော ရစရာရွိ သောငွေများ ဆုံးရှုံးသွားသောငွေများနှင့်ရွှေများပြန်လည်ရရှိ ကိန်းရှိသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ဘုရားဖူးခရီး၊ ရပ်ဝေးခရီးသွားရကိန်းလည်း ရှိပါသည်။
ချစ်သူ သမီးရည်းစားများ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ တနင်္လာ၊ သောကြာ သားသမီးများနှင့် ချစ်သူဖြစ်လျှင် အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ပြတ်သွားတတ်ပါသည်။ ပညာရေး ကံကောင်းပါသည်။ သင်တန်းတတ်ရန် စိတ္ကူးရွိသူမ်ား သင်တန်းတတ်ဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာအနေနှင့် မိမိ၏ မွေးနံဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားမှာ ကွမ်းရွက်(5)ရွက်, ဖယောင်းတိုင်အဖြူရောင် (5)တိုင်, ပန်းအဖြူရောင်(5)ပွင့်ကို ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
ဘာပဲလုပ်လုပအပင်ပန်းခရသလောက် အကျိုးမပေးတက်တဲ့ကာလဖြစ်သည်။ စိတ်ရှုပ်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကိစ္စများကြုံတတ်သည်။ သူတစ်ပါး အထင်လွှဲခြင်း၊ မကောင်းပြောချင်းများ ခံရကိန်းရှိသည်။
ချစ်ခင်သူများနှင့်မထင်မှတ်သာ အကြောင်းအရာများကြောင့် လမ်းခွဲရကိန်းရှိပါသည်။ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ခ်စ်သူရွိက မထင်မှတ်ဘဲ အဆင်မပြေခြင်း၊ ပျက်သွားခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ခ်စ်သူမရွိသူမ်ားကေတာ့ အချစ်သစ်တွေ့မည်၊။ မိမိထက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့်အဆင်ပြေတတ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှိသူများ၊ အိမ်ထောင် ရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ဆန်းပွင့်ခြင်းတို့ကြုံရကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးကံကောင်းပါသည်။ သင်တန်းကိစ္စ၊ အင်တာဗျူးကိစ္စများအဆင်ပြေ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးကံမကောင်းပါ။
အကြွေးတင်ခြင်း၊ အကြွေးပေးစရာရှိခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သောကရောက်ကိန်းရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များလည်း အဆင်ပြေမလိုလိုနှင့်အဆင်မ ပြေဖြစ်တတ်သည်။
နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်း၊ လူမျိုးခြားနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ငွေကြေးကံကောင်းမှုအားနည်းတတ်ပါသည်။
ယတြာကတော့ ဒီလအတွင်းငွေရေးကြေးရေး ကံကောင်းစေရန် ဘုရား တစ်ဆူဆူရဲ့ တနင်္ဂနွေထောင့်မှာ သင်္ဘောသီး(1)လုံးလှူပေးပါ။ အိမ္ဘုရားမွာ သပြေပန်းလှူပေးပါ
ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်များ ထင်ထင်ရှားရှား အောင်မြင်မည့်ကာလဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကုန်ကျများခြင်း၊ အေဖ၊ အေမ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။ ချစ်ခင်သောသူများနှင့်လည်းလမ်းခွဲရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူ အသစ်တွေ့လို့ စိတ်ခံစားရကိန်းရှိပါတယ်။
အချစ်ရေး ငွေကြေး ဒီလ ထဲကံကောင်းသေးပါ။ အ၀င်နဲ့ အထွက် ငွေကြေး အထွက်များရတတ်ပါတယ်။ ချေးထားသောငွေများပြန်မရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကံမကောင်းပါ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြုပြီးချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကာ လမ်းခွဲရကိန်း ကြုံရတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အားငယ်သလို ဖြစ်နေတတ်သည်။
ချစ်သူနှင့်စကားပြောအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ခရီးတစ်ခုသွားရတတ်သည်။ ခရီးသွားပြီးပြန် လာလျှင် ညံ့နေသောကံများကောင်း သွားတတ်ပါသည်။ မြေကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ၊ ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပတ် သက်ပြီး စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငွေအထွက်များခြင်း၊ ငွေကြေးပေး စရာရှိသည်ကို မပေးနိုင်ခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကင်မရာများ ၀င်ကိန်း၊ အဆင်ပြေကိန်း ရှိသည်။ အလှပြင်လုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း၊ လူထုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။
စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ငွေမကျန်ခြင်း၊ ငွေစုမရခြင်း များကြုံရတတ်ပါသည်။
ရပ်ဝေးမှမိတ်ဆွေ ဆရာသမား ၊ အင်္ဂါ၊ စေနသားသမီးမ်ား အကူ အညီရတတ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကိန်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ္ထိခိုက်သလို စိုးရိမ်သလို စိတ်သောကဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
ပညာရေးကိစ္စ၊ အထူးကောင်းပါသည်။ သင်တန်းကိစ္စများလည်း အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီး သင်တန်းတတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသာများ သင်တန်းတတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီကာလအ တွင်း စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်လျှင် ဘုရားဖူးခရီးထွက်လိုက်ပါ။
ယတြာကတော့ တနင်္လာဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် ကံ့ကော်ညွန့်(21)ညွန့်, ဖယောင်းတိုင်(21)တိုင် ချိုချဉ်(သကြားလုံး) (21)လုံး လှူပေးလိုက်ပါ။
မထင်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်း နေရာ အပြောင်းအလဲများ ပြောင်းရွေ့လုပ်ကိုင်ရမည့် ကာလဖြစ်သည်၊၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတတ်မှုအားကောင်းတတ်ပါသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၊ လူထုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်းရှိသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ရင်း၊ ဆွေရင်း၊ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်ကိန်းရှိသည်။
ခြေ၊ လက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင် ဖက်ဆန်းပွင့်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများ ဆန်းပွင့်ကိန်းရှိပါသည်။ ရည်စားရှိသူများအချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ ကြာသပတေးသားသမီးနှင့် ဇာတ်လမ်းဖြစ် လျှင်ပြတ်သွားတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမလိုလိုနှင့် မပြေဘဲလွဲလွဲနေတတ်ပါသည်။
၀င်စရာရှိ သောငွေများလည်း မ၀င်ခြင်း၊ ရစရာရှိသောလုပ်ငန်းများ လည်းမအောင်မြင်သေးခြင်းများကြံရတတ်သည်။ စေန၊ တနင်္ဂနွေသား ချစ်သူအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လျှင် ဖောက်ပြန်၍ ကွဲသွားတတ်သောကာလဖြစ်ပါသည်။ ပညာ ရေးကံမကောင်းပါ။
သင်တန်းများ တိုးလို့တန်းလန်း ဖြစ်နေတတ်သည်။ စိတ်ညစ်လျှင် ရပ်ဝေးခရီးထွက်ခြင်း၊ ဘုရားဖူးထွက်ခြင်း၊ ညအိပ်ညေနခရီးမ်ား ထွက်လိုက်ပါ။ ခရီးမှာပြန်လာလျှင် ညံ့နေသောကံများကောင်းသွား လိမ့်မည်။
ယကြာကတော့ ကြသပတေးဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် အသီး(19)လုံး ရွက်လှ(19)ညွန့် , ဖယောင်းတိုင်အနီရောင်(19) တိုင်ကို ထွန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
2020 ခုနြစ် (6)လပိုင်းအတြက် ခုနြစ်ရက်သားသမီး တစ္လစာဟောစာတမ်း
စီးပြားရေး၊ အလုပ်အကိုင္နွင့္ပတ် သက်ပြီး လူမ်ိုျးခား၊ နိုင်ငျံခားနွင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ္နွင့္ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား လုပ်ငန်း၊ျပည္ပနွင့္ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင္ကိန်း ရွိပါသည်။
ငြေရး၊ ကြေးရေး ကံမေကာင်းသေးပါ။ ငြေအထြက္မ်ာျးခင်း၊ ရစရာရွိတာမရျခင်း၊ ပေးစရာရွိတာ မေပျးဖစ်သေျးခင်း၊ အေကြးတင်ျခင်းမ်ား ကြုံရကိန်းရွိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ျေပာင်းရွှေ့ခ်င် စိတ္မ်ာျးဖစ်နေတတ္ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်ျေပာင်းလိုလျွင် ဤလကုန် (2)ရက်နေ့ကေ်္မွာျေပာင်းပါလေ။ ငယ်ရြယ်သူမ်ား ခ်စ်သူနွင့်အဆင္မျေပျဖစ်ရတတ်သည်။ တနင်္ဂေနြ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာသား ခ်စ်သူရွိလျွင် အဆင္မေပြ ပ်က်သြားတတ္ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရွိသူမ်ား အိမ်ထောင္ဖက္နွင့္ပတ်သတ်ပြီး စိတ်အေနွာင့်အ ယွက်ျဖစ်ရ၊ စကားမ်ားရတတ္ပါသည်။ အလုပ်အကိုင္မ်ား အစဉ်ျေပမလိုလိုနွင့် အဆင္မျေပဘဲရွိနေတတ္ပါ သည်။ အင္တာဗ်ူးကိစ္စ၊ သင္တန်းကိစ္စမ်ား စီစဉ်ပြီး လုပ်ျဖစ်ရန် ကြံကြာနေတတ္ပါသည်။
ယတြာအေနနွင့် တနင်္ဂေနြေန့ အိမ္ဘုရားစဉ္တငြ် ပန်းအဝါ(15)ပြင့် ဖေယာင်းတိုင်-အဝါယောင်(15)တိုင် အေမွှးတိုင်(15)တိုင် အသီး(15)လုံးကို ကပ္လှူထြန်းညှိပူဇော်ပေးလိုက္ပါ။ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်းမ်ားရွိလျွင် အုန်းညြန့် (၁၂) ညွှန့္နွင့်ရိုက်ပြီး ဆုတောင်းပါ။
မျွေ္လာင့္ခ်က္မ်ားပြီျးပည့္စုံမည့္ကာလျဖစ်သည်။ မိမျိဖစ္ခ်င်သောအရာမွန်သမျွ ယခုကာလအတြင်းထူျးခားတိုက္ဆိုင္စျြာပည့်ဝတက်သည်။လုပ်ဆောင္မှုတိုင်း၌ စိတ္ပါလက္ပါရွိပါစေ။
အေဆာက်အဦးနွင့္ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ တိုက္တာဆောက္လုပ်ျခင်း၊ အိမ်သစ်ဆောက္လုပ်ျခင်း၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ်ငန်း၊ျေမယာနွင့္ပတ် သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပြဲစားလုပ်ငန်း၊ ပြဲရုံလုပ်ငန်း၊ အောင်ျမင္ကိန်းရွိပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့္လမ်ားမရခဲ့သော ရစရာရြိ သောငြေမ်ား ဆုံးရှုံးသြားသောငြေမ်ားနွင့်ရွှေမ်ာျးပန္လည်ရရွိ ကိန်းရွိသည်။ မထင္မွတ္ဘဲ ဘုရားဖူးခရီး၊ ရပ်ဝေးခရီးသြားရကိန်းလည်း ရွိပါသည်။
ရပ်ဝေးမွ ဆြေမ်ိုးသား ခ်င်း မ်ားနွင့္လည်းတြေ့ရကိန်းရွိပါ သည်။ စက္ပစ္စည်းနွင့္ပတ်သက္လို့ ငြေကြးကုန္က်မ်ားရတတ္ပါသည်။ ငြေအထြက္မ်ားတတ္ပါသည်။ ငြေပ်ာက္ကိန်းရွိသည်။
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ သ၊ ဟ အက္ခရာအမည္နွင့္စသောသူ မ်ားကိုငြေရးကြေးရေးကိစ္စ သတိထားပါ၊ အာမခံနွင့်ငြေမခ်းပါနွင့်။ အိမ်ထောင်ရွင္မမ်ား အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ျေပပြီး အိမ်ထောင်ရွင်အမ်ိုးသားမ်ား ဆန်းပြင့္ကိန်းရွိသော ကာလျဖစ္ပါသည်။
ခ်စ်သူ သမီးရည်းစားမ်ား ခ်စ်သူနွင့်အဆင္မျေပျဖစ္တတ်သည်။ တနင်္လာ၊ သောကြာ သားသမီးမ်ားနွင့် ခ်စ်သျူဖစ္လျွင် အဆင္မျေပျဖစ်ပြီျးပတ်သြားတတ္ပါသည်။ ပညာရေး ကံကောင်းပါသည်။ သင္တန်းတတ်ရန် စိတ္ကူးရြိသူမ်ား သင္တန်းတတ်ျဖစ္တတ်သည်။
အင္တာဗ်ူးျေဖမည့်သူမ်ား အောင်ျမင် ကိန်းရွိသည်။ တစ္ခါတစ်ရံ အိမ္မွာမေနလိုစိတ်၊ ခရီးထြက္ခ်င္စိတ္မ်ာျးဖစ်နေတတ်သည်။
ယတြာအေနနွင့် မိမိ၏ မြေးနံဂြိုလ်ဒေါင့္ဘုရားမွာ ကြမ်းရြက်(5)ရြက်, ဖေယာင်းတိုင်အျဖူရောင် (5)တိုင်, ပန်းအျဖူရောင်(5)ပြင့္ကို ကပ္လှူပူဇော်ပေးပါ။
ဘာပဲလုပ္လုပအပင္ပန်းခရသေလာက် အက်ိုးမေပးတက္တဲ့ကာလျဖစ်သည်။ စိတ်ရှုပ္စရာ၊ စိတ္ပ္က္စရာ၊ စိတ္ဓာတ္က်စရာကိစ္စမ်ားကြုံတတ်သည်။ သူတစ္ပါး အထင္လွျှဲခင်း၊ မေကာင်ျးေပာခ်င်းမ်ား ခံရကိန်းရွိသည်။
ခ်စ္ခင်သူမ်ားနွင့္မထင္မွတ်သာ အေကြာင်းအရာမ်ားကြောင့် လမ်းခြဲရကိန်းရွိပါသည်။ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ခ္စ်သူရြိက မထင္မွတ္ဘဲ အဆင္မျေပျခင်း၊ ပ်က်သြာျးခင်းမ်ား ကြုံရတတ္ပါသည်။ ခ္စ်သူမရြိသူမ်ားကေတာ့ အခ်စ်သစ်တြေ့မည်၊။ မိမိထက်ငယ်ရြယ်သူမ်ားနွင့်အဆင်ျေပတတ္ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရွိသူမ်ား၊ အိမ်ထောင် ရေးအဆင္မျေပျဖစ္တတ်သည်။ ဆန်းပြင့်ျခင်းတို့ကြုံရကိန်းရွိသည်။ ပညာရေးကံကောင်းပါသည်။ သင္တန်းကိစ္စ၊ အင္တာဗ်ူးကိစ္စမ်ားအဆင်ပြေ အောင်ျမင္ကိန်းရွိပါသည်။ ငြေရး၊ ကြေးရေးကံမေကာင်းပါ။
အေကြးတင်ျခင်း၊ အေကြးပေးစရာရျွိခင်းမ်ား ကြုံရတတ္ပါသည်။ ငြေရးကြေးရေးနွင့် ကိစ္စနွင့္ပတ်သက်ပြီး သောကေရာက္ကိန်းရွိပါသည်။ အလုပ်အကိုင္မ်ားလည်း အဆင်ျေပမလိုလိုနွင့်အဆင္မျေပျဖစ္တတ်သည်။
နိုင်ငျံခားလုပ်ငန်း၊ လူမ်ိုျးခားနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အစိုးရနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းမ်ား အောင်ျမင္ကိန်းရွိပါသည်။ ငြေကြးနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ စက္ပစ္စည်းနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းလုပ်သူမ်ား ငြေကြးကံကောင်းမှုအားနည်းတတ္ပါသည်။
ယတြာကေတာ့ ဒီလအတြင်းငြေရးကြေးရေး ကံကောင်းစေရန် ဘုရား တစ္ဆူဆူရဲ့ တနင်္ဂေနြေထာင့္မွာ သေင်္ဘာသီး(1)လုံးလှူပေးပါ။ အိမ္ဘုရားမြာ သျေပပန်းလှူပေးပါ
ရည်ရြယ္ခ်က် ရည္မွန်းခ်က္မ်ား ထင္ထင်ရွားရွား အောင်ျမင္မည့္ကာလျဖစ်သည်။ ငြေကြးကုန္က်မ်ာျးခင်း၊ အေဖ၊ အေမ က်န်းမာရေးညံျ့ခင်းမ်ားကြုံရတတ္ပါသည်။ ခ်စ္ခင်သောသူမ်ားနွင့္လည်းလမ်းခြဲရတတ္ပါသည်။ ခ်စ်သူ အသစ်တြေ့လို့ စိတ္ခံစားရကိန်းရွိပါတယ်။
အခ်စ်ရေး ငြေကြး ဒီလ ထဲကံကောင်းသေးပါ။ အ၀င္နဲ့ အထြက် ငြေကြး အထြက္မ်ားရတတ္ပါတယ်။ ခေ်းထားသောငြေမ်ာျးပန္မရျခင်း၊ က်န်းမာရေးနွင့္ပတ်သက်ပြီး ငြေကုန်ကြေးက်မ်ာျးခင်းမ်ားကြုံရတတ္ပါသည်။
တနင်္လာ၊ ကြာသပေတးသားသမီးကို ငြေမေခ်းပါနဲ့ ။ အိမ္ကိစ္စ၊ အေဆာက်အဦးကိစ္စမ်ား၊ ဆိုင္ခန်းကိစ္စမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင္မည်။ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ စက္ပစ္စည်း၊ စပ္တူရွယ်ယာလုပ်ငန်းမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင္ကိန်းရွိသော ကာလျဖစ္ပါသည်။
ဒီလအတြင်း အခ်စ်ရေးကံမေကာင်းပါ။ မိန်းမတစ်ယောက္ကို အေကြာင်ျးပုပြီးခ်စ်သူနွင့်အဆင္မျေပျဖစ္ကာ လမ်းခြဲရကိန်း ကြုံရတတ္ပါသည်။ တစ္ခါတစ်ရံ စိတ်အားငယ်သလျိုဖစ်နေတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရွိသူမ်ား သား၊သမီးရကိန်းရွိပါသည်။ ပညာရေးကံမေကာင်းပါ၊ သင္တန်းတတ်ရန် ကိစ္စမ်ားပ်က်သြားကိန်းရွိသည်။
ယတြာကေတာ့ မိမိထက်(၃)နွစ်အသက်ကြီးသောတစ်ဦးကို အက်င်္ီ အျဖူရောင်အသစ်(1)ထည္လှူပေးလိုက္ပါ။ အိမ္ဘုရားမွာ နွင်းဆီပန်း အနီရောင်(၁၇)ပြင့် လှူပေးလိုက္ပါ။
လက်ရွိလုပ်နေသာ လုပ်ငန်းအား မိတ်ဆြေသူငယ္ခ်င်းတစ်ဦးကြောင့် နွောင်နွေးပြီး လွှဲခေ်္တာက်သော့ကာလျဖစ်သည်။ျေခ၊ လက္ထိမိခိုက္မျိဖတ္တတ်သျဖင့် ဂရုစိုက်ပေးပါ ။စိတ္ထိခိုက်ျခင်း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင်းမ်ား တစ္ခါတစ်ရျံဖစ်ပေါ်တတ္ပါသည်။
ခ်စ်သူနွင့္စကာျးေပာအဆင္မျေပျဖစ္တတ်သည်။ မထင္မွတ္ဘဲ ခရီးတစ္ခုသြားရတတ်သည်။ ခရီးသြားပြီျးပန် လာလျွင် ညံ့နေသာကံမ်ားကောင်း သြားတတ္ပါသည်။ျေမကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စ၊ အေမြကိစ္စ၊ ငြေရးကြေးရေးနွင့္ပတ် သက်ပြီး စိတ်သောကေရာက်ရတတ္ပါသည်။
က်န်းမာရေးနွင့္ပတ်သက်ပြီး ငြေအထြက္မ်ာျးခင်း၊ ငြေကြးပေး စရာရွိသည္ကို မေပးနိုင်ျခင်းမ်ား ကြုံရတတ္ပါသည်။ ကား၊ ကြန္ပ်ူတာ၊ ကင္မရာမ်ား ၀င္ကိန်း၊ အဆင်ျေပကိန်း ရွိသည်။ အလျွပင္လုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း၊ လူထုနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင္ကိန်း ရွိပါသည်။
စပ္တူရွယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ်ငန်းမ်ား အလုပ်ျဖစ်ပြီး ငြေမက်န်ျခင်း၊ ငြေစုမရျခင်း မ်ားကြုံရတတ္ပါသည်။
စီးပြားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူမ်ား ငြေရးကြေးရေးစကာျးေပာရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရွိသူမ်ား ဆန်းပြင့္ကိန်းရွိသည်။ ပညာရေးကံမေကာင်းပါ။ သင္တန်းတတ်ရန္ကိစ္စမ်ား ပ်က်သြားတတ္ပါသည်။
ယတြာကေတာ့ အိမ္ဘုရားမွာ ပန်းအျဖူရောင်(19)ပြင့် ဆီမီးခြက်(19)ခြက်,အေမွှးတိုင်(19)တိုင် ကပ္လှူထြန်းညှိပူဇော်ပေးလိုက္ပါ။
အလြန်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ္ခုကြားရတက္ပါသည် လူခ်စ္လူခင္မ်ားမဲ့ကာလျဖစ္မည်။ စက္ပစ္စည်းနွင့္ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ စပ္တူရွယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဆောက္လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ျပည္ပရင်းနွီးမှုလုပ်ငန်းမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင် ကိန်းရွိပါသည်။
ရပ်ဝေးမွစပ္တူရွယ်ယာလုပ်ငန်းမ်ားလည်း ပေါ်တတ္ပါသည်။ ပြဲရုံပြဲစားလုပ်ငန်း၊ျေမယာနွင့္ပတ် သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂနွင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ ပဲမ်ိုးစုံရောင်းဝယ်ရေး စေသာ ကြာသပေတးနံလုပ်ငန်းမ်ားလည်း အဆင်ျေပေအာင်ျမင္တတ်သော ကာလျဖစ္ပါသည်။
ငြေကြးအ၀င္နည်း၊ အထြက်ကြမ်ျးဖစ်နေတတ္ပါသည်။ မထင္မွတ္ဘဲ ခရီးသြားရတတ္ပါသည်။ ကောင်းသောခရီျးဖစ္တတ္ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရွိသူမ်ား အိမ်ထောင္ဖက္နွင့္ပတ်သက်ပြီး စိတ်အေနွာင့်အယွက်ျဖစ်ရတတ်သည်။
အိမ်ထောင္ဖက်သည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ျပန်ျခင်း/ အိမ္က ထြက်သြာျးခင်း စန်းပြင့်ျခင်းတိျု့ဖစ် ၍စိတ်အေနွာင့်အယွက်ျဖစ်ရတတ္ပါသည်။
ရပ်ဝေးမွမိတ်ဆြေ ဆရာသမား ၊ အင်္ဂါ၊ စေနသားသမီးမ်ား အကူ အညီရတတ္ပါသည်။ ငယ်ရြယ်သူမ်ားခ်စ်သူနွင့်အဆင္မျေပျဖစ္ကိန်းရွိသည်။ တစ္ခါတစ်လေ စိတ္ထိခိုက်သလို စိုးရိမ်သလို စိတ်သောကျဖစ်နေတတ္ပါသည်။
ပညာရေးကိစ္စ၊ အထူးကောင်းပါသည်။ သင္တန်းကိစ္စမ်ားလည်း အဆင်ျေပေအာင်ျမင်ပြီး သင္တန်းတတ်ရန် ရည်ရြယ္ထားသာမ်ား သင္တန်းတတ်ျဖစ္လိမ့္မည်။ ဒီကာလအ တြင်း စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ္လျွင် ဘုရားဖူးခရီးထြက္လိုက္ပါ။
ယတြာကေတာ့ တနင်္လာဂြိုလ်ဒေါင့္ဘုရားတြင် ကံ့ကော်ညြန့်(21)ညြန့်, ဖေယာင်းတိုင်(21)တိုင် ခ်ိုခ်ဉ်(သကြားလုံး) (21)လုံး လှူပေးလိုက္ပါ။
မထင္မွတ္ထားသော လုပ်ငန်း နေရာ အျေပာင်းအလဲမ်ားျေပာင်းရြေ့လုပ္ကိုင်ရမည့် ကာလျဖစ်သည်၊၊ အလုပ်အကိုင္တိုးတတ္မှုအားကောင်းတတ္ပါသည်။ ငြေကုန်ကြေးက်မ်ားနေတတ်သည်။
ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ်ငန်း၊ ဘာသျာပန္လုပ်ငန်း၊ လူထုနွင့္ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်းမ်ား အဆင်ျေပေအာင်ျမင္ကိန်းရွိသော ကာလျဖစ္ပါသည်။ မိတ်ရင်း၊ ဆြေရင်း၊ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ္မ်ိုးနွင့် အဆင္မေပျြဖစ္ကိန်းရွိသည်။
ျေခ၊ လက် ထိခိုက္ဒဏ်ရာရျခင်း၊ က်န်းမာရေးညံ့၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်ျးပရျခင်းမ်ား ကြုံရတတ္ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရွင် အမ်ိုးသမီးမ်ား အိမ်ထောင် ဖက္ဆန်းပြင့်ျခင်း၊ အိမ်ထောင္ဖက္နွင့်အဆင္မျေပျဖစ်ျခင်းမ်ား ကြုံရတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရွင်အမ်ိုးသားမ်ား ဆန်းပြင့္ကိန်းရွိပါသည်။ ရည္စားရွိသူမ်ားအခ်စ်ရေး အဆင္မျေပျဖစ္တတ်သည်။ တနင်္ဂေနြ၊ ကြာသပေတးသားသမီးနွင့် ဇာတ္လမ်ျးဖစ် လျွင်ျပတ်သြားတတ္ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ျေပမလိုလိုနွင့် မျေပဘဲလြဲလြဲနေတတ္ပါသည်။
၀င္စရာရွိ သောငြေမ်ားလည်း မ၀င်ျခင်း၊ ရစရာရွိသောလုပ်ငန်းမ်ား လည်းမေအာင်ျမင်သေျးခင်းမ်ားကြံရတတ်သည်။ စေန၊ တနင်္ဂေနြသား ခ်စ်သူအိမ်ထောင္ဖက်ျဖစ္လျွင် ဖောက်ျပန်၍ ကြဲသြားတတ်သောကာလျဖစ္ပါသည်။ ပညာ ရေးကံမေကာင်းပါ။
သင္တန်းမ်ား တိုးလို့တန်းလန်ျးဖစ်နေတတ်သည်။ စိတ်ညစ္လျွင် ရပ်ဝေးခရီးထြက်ျခင်း၊ ဘုရားဖူးထြက်ျခင်း၊ ညအိပ်ေညနခရီးမ်ား ထြက္လိုက္ပါ။ ခရီးမျွာပန္လာလျွင် ညံ့နေသာကံမ်ားကောင်းသြား လိမ့္မည်။
ယကြာကေတာ့ ကြသပေတးဂြိုလ်ဒေါင့္ဘုရားတြင် အသီး(19)လုံး ရြက္လွ(19)ညြန့် , ဖေယာင်းတိုင်အနီရောင်(19) တိုင္ကို ထြန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
Categories Baydin Leaveacomment
မန်တေ လးသားတှဘေယျလောကျညီညှတျကွသ လဲဆိုတာဒီနဖွေ့ဈရ ပျလေးကသကျသပွေသှားတယျ
ယခု သတငျးကို ( Wai Lin ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ
မနျးသူ/မနျးသားတှညေီညှတျခကျြပဲဗြာ…..ဒီနေ့ (28-5-2020) နလေ့ညျပိုငျး Scoopyi နဲ့ ကောငျမလေးဆီက ဖုနျးလုပွီး ထှကျပွေးလို့ လိုကျဖမျးကွတယျ
မောငျးတာမွနျခကျြ စကူပီနဲ့တောငျ မနဲလိုကျရတယျ….နောကျဆုံး ဒိုတဈစီးနဲ့ နောကျထပျဆိုငျကယျတဈစီးက ဆိုငျကယျခငျြး ဝငျတိုကျပွီး ဖမျးပေးမှ မိသှားတယျ။
ဖမျးမမိလောကျဘူးထငျပွီး နောကျက လိုကျဖမျးတဲ့သူတှကေို လှညျ့ဆဲသေးတာတဲ့ဗြ။
၂ ယောကျဖမျးမိပါတယျ။ ၃၆ လမျး၊ ၈၀ x ၈၁ ကွားမှာမိတာပါ……
နောကျကဆိုငျကယျကိုယျစီနဲ့ လိုကျပွီးဝိုငျးဖမျးတဲ့ ညီအဈကိုတှေ တျောပါတယျဗြာ…. လေးစားပါတယျဗြ
Photo – Nay Nat Nwe
မန္တေ လးသားတွေဘယ်လောက်ညီညွှတ်ကြသ လဲဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်ရ ပ်လေးကသက်သေပြသွားတယ်
ယခု သတင်းကို ( Wai Lin ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်
မန်းသူ/မန်းသားတွေညီညွတ်ချက်ပဲဗျာ…..ဒီနေ့ (28-5-2020) နေ့လည်ပိုင်း Scoopyi နဲ့ ကောင်မလေးဆီက ဖုန်းလုပြီး ထွက်ပြေးလို့ လိုက်ဖမ်းကြတယ်
မောင်းတာမြန်ချက် စကူပီနဲ့တောင် မနဲလိုက်ရတယ်….နောက်ဆုံး ဒိုတစ်စီးနဲ့ နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက ဆိုင်ကယ်ချင်း ဝင်တိုက်ပြီး ဖမ်းပေးမှ မိသွားတယ်။
ဖမ်းမမိလောက်ဘူးထင်ပြီး နောက်က လိုက်ဖမ်းတဲ့သူတွေကို လှည့်ဆဲသေးတာတဲ့ဗျ။
၂ ယောက်ဖမ်းမိပါတယ်။ ၃၆ လမ်း၊ ၈၀ x ၈၁ ကြားမှာမိတာပါ……
နောက်ကဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီနဲ့ လိုက်ပြီးဝိုင်းဖမ်းတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ တော်ပါတယ်ဗျာ…. လေးစားပါတယ်ဗျ
Categories New Leaveacomment
အမြိုးသမီးတှေ အမှနျအတိုငျး ဖှငျ့ပွောလမေ့ရှိတဲ့အခကျြ(၄)ခကျြ…
ရိုးသားမှုဆိုတာ ခဈြခွငျးတဈခုမှာ အရေးအကွီးဆုံး မရှိမဖွဈပါပဲ။ သို့ပမေယျ့လညျး တဈခြို့သော အတိတျဖွဈရပျ တှဟော ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွဖို့ အခွအေနမေပေးတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။ အတိတျဟာ အတိတျပဲဖွဈပွီးတော့ အတိတျကိုပွနျတူးဆှရငျ
လကျရှိအခွအေနတှေေ ပကျြစီးတတျပါတယျ။ တကယျလို့ အတိတျဟာ လကျရှိအခြိနျကို လာရောကျထိခိုကျမှု မရှိစနေိုငျဘူးဆိုရငျတော့ အနောကျမှာပဲ ခနျြထားခဲ့တာ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျုပျတို့လညျး အလားတူ ရိုးသားစှာနဲ့
လိမျကောငျး လိမျမိဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ဒီဆောငျးပါးလေးကတော့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ အမှနျအတိုငျး ဖှငျ့ပွောလို့မရှိတဲ့ အရာ (၄) မြိုးအကွောငျး ဖျောပွမှာဖွဈပါတယျ။
(၁)သူမ ပတျသကျခဲ့ဖူးတဲ့ အမြိုးသားတှရေဲ့ အရအေတှကျ
သူမဟာ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ ပရောဖကျရှငျနယျတဈယောကျ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ သူမ ရညျးစား ဘယျနှဈယောကျလောကျပဲ ထားခဲ့ထားခဲ့ သငျ့အနနေဲ့ သခြောတာကတော့ သူမဟာ အရအေတှကျကို လိမျထားပါပွီ။ အိမျထောငျမကခြငျ ကိုယျခန်ဓာနှီးနှောခဲ့ဖူးခွငျးဟာ
အရှတေို့ငျးသာတှေ အမွငျမှာတော့ တားမွဈခကျြတဈခုပါ။ တခွား လူမှုအသိုငျးအဝိုငျး အဖှဲ့အစညျးတှေ ဘယျလိုပဲ တိုးတကျနပေါစေ ဒီတဈခကျြကတော့ အခုအခြိနျထိ တားမွဈထားဆဲပါ။ ဒီတော့ သေးငယျတဲ့ ဒီလိမျညာမှုလေးကို ဒီအတိုငျးပဲ ထားပွီး ပွနျလညျမတူးဆှပါနဲ့တော့။
(၂) သူမရဲ့ အလေးခြိနျ
အမြိုးသမီးတှဟော စှဲမကျဖှယျကောငျးတဲ့ ဖှံ့ဖှံ့ထှားထှား ကိုယျခန်ဓာကိုယျတှေ ရှိသငျ့ပါတယျ။ ဒီ့ထကျကြျောပွီး ဝသှားရငျတော့ ကွညျ့မကောငျးတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဝနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော သူမတို့ရဲ့ အလေးခြိနျကို အနညျးဆုံး ငါးကီလိုလောကျ လြှော့ပွီး ဖွတေတျကွပါတယျ။
တဈခါတဈရံ ၅၀ ကီလို ဆိုတာ သူမတို့ရှိသငျ့တဲ့ အနတေျော အလေးခြိနျလောကျလို့ ယူဆပွီး အမွဲတမျး ၅၀ကီလိုလို့ ဖွတေတျကွပါတယျ။ ဒီအခါ သငျဘယျမိနျးကလေးကို မေးလိုကျ မေးလိုကျ ၅၀ ကီလိုလို့ ဖွတောကို တှရေ့မှာဖွဈပွီး “ ကမ်ဘာပျေါက
မိနျးမတှေ အကုနျလုံး ၅၀ ကီလိုဝနျးကငျြပဲရှိနပွေီး ဘာကွောငျ့ ပုံမကြ ပနျးမကတြှေ ဖွဈနရေတာလဲ”လို့ တောငျ ညညျးမိပါလိမျ့မယျ။ သူမကတော့ မပိနျမခငျြး မေးလိုကျတိုငျး ၅၀ ကီလိုဝနျးကငျြလောကျပဲ လှညျ့ပတျ ဖွနေမှောပါ။
(၃) သူမရဲ့ ရပျတညျမှု
အမြိုးသမီးတှေ အမှီအခိုကငျးအောငျ ရပျတညျနိုငျတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမ ဒေါသထှကျတဲ့ အခါတိုငျး သူမအတှကျ အမြိုးသားတဈယောကျ မလိုအပျဘူးလို့ အျောပွောတတျတာဟာ တကယျတော့ ညာတာပါ။
ဒီတော့ အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ သိထားရမှာက သူမဘာတှပေဲပွောနေ ပွောနေ အမြိုးသားတဈယောကျ မရှိဘဲ မရပျတညျနိုငျပါဘူး။
(၄) သူမစိတျကူး မယဉျတတျဘူးလို့ ဆိုခဲ့ရငျ
အမြိုးသမီးတှကေ သူမတို့ဟာ အခြုပျအနှောငျကငျးတယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတယျ၊ သနျစှမျးတယျ၊ လုံခွုံစိတျခမြှု ရှိတယျဆိုတာ အလှနျပွခငျြကွပါတယျ။ ဒီလိုအရာတှေ ပွသလိုကျနိုငျတာကွောငျ့ သူမတို့ဟာ စိတျကူးယဉျ မဆနျတတျတဲ့သူတှတေော့ မဟုတျပါဘူး။
တခွား အမြိုးသမီးတှနေဲ့ မတူပဲ ခပျထနျထနျ၊ ခပျမာမာ နတေတျကွပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ သူမတို့တှဟော အမြိုးသမီးတှထေဲ အမြိုးသမီး တဈယောကျပဲ ဖွဈတာကွောငျ့ သူမတို့မှာလညျး စိတျကူးယဉျဆနျတတျတဲ့ စိတျတှေ အပွညျ့ရှိနပေါတယျ။ ခရကျဒဈ
ရိုးသားမှုဆိုတာ ချစ်ခြင်းတစ်ခုမှာ အရေးအကြီးဆုံး မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သော အတိတ်ဖြစ်ရပ် တွေဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြဖို့ အခြေအနေမပေးတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ဟာ အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ အတိတ်ကိုပြန်တူးဆွရင်
လက်ရှိအခြေအနေတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အတိတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ကို လာရောက်ထိခိုက်မှု မရှိစေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အနောက်မှာပဲ ချန်ထားခဲ့တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အလားတူ ရိုးသားစွာနဲ့
လိမ်ကောင်း လိမ်မိဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလို့မရှိတဲ့ အရာ (၄) မျိုးအကြောင်း ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁)သူမ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေအတွက်
သူမဟာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သူမ ရည်းစား ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ထားခဲ့ထားခဲ့ သင့်အနေနဲ့ သေချာတာကတော့ သူမဟာ အရေအတွက်ကို လိမ်ထားပါပြီ။ အိမ်ထောင်မကျခင် ကိုယ်ခန္ဓာနှီးနှောခဲ့ဖူးခြင်းဟာ
အရှေ့တိုင်းသာတွေ အမြင်မှာတော့ တားမြစ်ချက်တစ်ခုပါ။ တခြား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လိုပဲ တိုးတက်နေပါစေ ဒီတစ်ချက်ကတော့ အခုအချိန်ထိ တားမြစ်ထားဆဲပါ။ ဒီတော့ သေးငယ်တဲ့ ဒီလိမ်ညာမှုလေးကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားပြီး ပြန်လည်မတူးဆွပါနဲ့တော့။
(၂) သူမရဲ့ အလေးချိန်
အမျိုးသမီးတွေဟာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ကျော်ပြီး ဝသွားရင်တော့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဝနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူမတို့ရဲ့ အလေးချိန်ကို အနည်းဆုံး ငါးကီလိုလောက် လျှော့ပြီး ဖြေတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ၅၀ ကီလို ဆိုတာ သူမတို့ရှိသင့်တဲ့ အနေတော် အလေးချိန်လောက်လို့ ယူဆပြီး အမြဲတမ်း ၅၀ကီလိုလို့ ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါ သင်ဘယ်မိန်းကလေးကို မေးလိုက် မေးလိုက် ၅၀ ကီလိုလို့ ဖြေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး “ ကမ္ဘာပေါ်က
မိန်းမတွေ အကုန်လုံး ၅၀ ကီလိုဝန်းကျင်ပဲရှိနေပြီး ဘာကြောင့် ပုံမကျ ပန်းမကျတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ”လို့ တောင် ညည်းမိပါလိမ့်မယ်။ သူမကတော့ မပိန်မချင်း မေးလိုက်တိုင်း ၅၀ ကီလိုဝန်းကျင်လောက်ပဲ လှည့်ပတ် ဖြေနေမှာပါ။
(၃) သူမရဲ့ ရပ်တည်မှု
အမျိုးသမီးတွေ အမှီအခိုကင်းအောင် ရပ်တည်နိုင်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ဒေါသထွက်တဲ့ အခါတိုင်း သူမအတွက် အမျိုးသားတစ်ယောက် မလိုအပ်ဘူးလို့ အော်ပြောတတ်တာဟာ တကယ်တော့ ညာတာပါ။
ဒီတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သိထားရမှာက သူမဘာတွေပဲပြောနေ ပြောနေ အမျိုးသားတစ်ယောက် မရှိဘဲ မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။
(၄) သူမစိတ်ကူး မယဉ်တတ်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ရင်
အမျိုးသမီးတွေက သူမတို့ဟာ အချုပ်အနှောင်ကင်းတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ သန်စွမ်းတယ်၊ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိတယ်ဆိုတာ အလွန်ပြချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေ ပြသလိုက်နိုင်တာကြောင့် သူမတို့ဟာ စိတ်ကူးယဉ် မဆန်တတ်တဲ့သူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တခြား အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မတူပဲ ခပ်ထန်ထန်၊ ခပ်မာမာ နေတတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူမတို့တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထဲ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်တာကြောင့် သူမတို့မှာလည်း စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်တဲ့ စိတ်တွေ အပြည့်ရှိနေပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
ဆီးခြိုရှိသူမြားအတှကျ သံပုယိုသီး၏ အထောကျအကူ
သံပရိုသီးမှာ အမြှငျဓာတျ၊ ဗီတာမငျစီ ၊ ပိုတကျဆီယမျတို့လို မြိုး နှလုံးကိုကနျြးမာစနေိုငျတဲ့ ဓာတျတှပေါဝငျနပေါတယျ။ သညျဓာတျတှကေ ဆီးခြိုရှိတဲ့ သူတှမှော နှလုံးကနျြးမာအောငျ အထောကျအပံ့ပေးပါတယျ။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျစီက သှေးတှငျးသကွားဓာတျပမာဏကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုရှိသူတှအေနနေဲ့ မနကျခငျးတိုငျးမှာ သံပရိုသီးနဲ့ ရနှေေးသောကျသုံးပေးမယျဆိုရငျ ဇီဝတှငျး ဖွဈစဉျတှကေို တိုးတကျကောငျးမှနျစမှောပါ။
အစားအစာတှစေားတဲ့အခါမှာ သံပရိုသီးလေးထညျ့ပွီး စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ခံတှငျးလိုကျပွီး လနျးဆနျးမှုကိုခံစားရစမှောပါ။ ဆီးခြိုရှိသူတှအေနနေဲ့လညျး နစေ့ဉျစားသုံးတဲ့အစားအစာထဲမှာ သံပရိုသီးထညျ့စားပွီး ကနျြးမာရေးအကြိုး အာနိသငျတှရေယူလိုကျပါ။
၁။ သံပရိုသီးရဲ့ဗီတာမငျစီက သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို ကဆြငျးစနေိုငျ ။
သံပရိုသီးက အစားအစာတှရေဲ့အရသာကို တိုးစနေိုငျပါတယျ။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျစီက ဆီးခြိုဝဒေနာခံစားရနိုငျခွကေို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။ သဈသီးတှနေဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို နှဈခွိုကျစှာစားသုံးသူတှမှော ဆီးခြိုရောဂါဖွဈနိုငျခွကေို တျောတျောလေးလြော့ပါးစနေိုငျတာပါ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျတဈမြိုးဖွဈတဲ့ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျစီက အမြိုးအစား-၂ ဆီးခြိုရောဂါကို ကုသရာမှာအထောကျအကူပွုပေးနိုငျတယျလို့ လလေ့ာမှုတှအေရ သိရပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျစီကိုလညျး သံပရိုသီးကနရေရှိနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီကို ပုံမှနျစားသုံးပေးမယျဆိုရငျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို လြော့ကစြနေိုငျတာကွောငျ့ နစေ့ဉျစားသုံးတဲ့အစားအစာထဲမှာ သံပရိုသီးလေးထညျ့စားကွဖို့ ပွောပါရစေ။
၂။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့အမြှငျဓာတျက သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပွီး နှလုံးထိခိုကျနိုငျခွကေိုလြော့ကစြနေိုငျ ။
သံပရိုသီးမှာ အမြှငျဓာတျ ၂.၄ ဂရမျပါဝငျနတောကွောငျ့ သံပရိုသီးကို စားသုံးပေးရုံနဲ့ ဆီးခြိုသမားတှမှော လိုအပျတဲ့အမြှငျဓာတျကိုရရှိစမှောဖွဈပွီး နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါဖွဈနိုငျခွကေို ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။
အမြှငျဓာတျပါတဲ့အစားအစာတှကေ အငျဆူလငျလိုအပျမှုကိုလြှော့ခပြေးနိုငျသှေးတှငျး ကိုလကျစထရောပမာဏကို ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။ အမြှငျဓာတျကအဆာခံနိုငျစတောကွောငျ့ ခဏခဏ မစားမိစအေောငျလုပျဆောငျပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးတှငျး သကွားဓာတျတှမေကဆြငျးအောငျအထောကျအကူပွုပေးနိုငျပါ တယျ။
၃။ ပိုတကျဆီယမျက နှလုံးပွဿ နာကငျးဝေးစနေိုငျ
ပိုတကျဆီယမျက သှေးပေါငျခြိနျကိုလြော့ကစြနေိုငျပွီး လဖွေတျနိုငျခွနေဲ့ ရုတျတရကျနှလုံးရပျတနျ့တာမြိုးဖွဈနိုငျခွကေိုကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျစားသုံးတဲ့အစားအစာတှထေဲမှာ သံပရိုသီးပါဝငျအောငျ စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ဆီးခြိုရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ဖွဈလာတတျတဲ့ နှလုံးပွဿနာတှနေဲ့ လဖွေတျနိုငျခွတှေကေိုကဆြငျးစေ နိုငျပါတယျ။
ဆီးခြိုဝဒေနာသညျတှအေနနေဲ့ အစာခွစေနဈကောငျးမှနျအောငျ ထိနျးသိမျးလုပျဆောငျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဆီးခြိုဝဒေနာခံစားရတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဖွဈစဉျတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးက ကဆြငျးသှားတတျကွပါတယျ။ သညျလိုကြ ဆငျးမှုဖွဈစဉျတှထေဲမှာ အစာခွစေနဈဖွဈစဉျလညျး တဈခုအပါအဝငျပါ။
ဒါကွောငျ့ အခနျ့မသငျ့တဲ့အခါဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတှဟော စားခဉျြ့ပွနျတာ၊ အစာမကွတောမြိုးတှခေံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သံပရိုသီးတဈစိတျလောကျကိုရနှေေးလေးနဲ့ သောကျသုံးပေးပွီး အစာခွစေနဈပွဿနာတှနေဲ့ ခပျကငျး ကငျးနလေိုကျပါ။
၅။ အာဟာရစုပျယူမှုကို ကောငျးမှနျစနေိုငျတယျ။
ဆီးခြိုရောဂါသညျတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျက ပုံမှနျသူတှထေကျ အာဟာရစုပျယူနိုငျစှမျးပိုနညျးကွပါတယျ။ အခြိုဓာတျကို အနညျးငယျသာစားသုံးရတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျက အာဟာရ ဓာတျတှရေရှိမှုမှာ အနညျးငယျအခကျအခဲရှိ နတောလညျးဖွဈပါတယျ။သညျပွဿနာတှကေို ပွလေညျစဖေို့ ကတော့ နစေ့ဉျစားသုံးတဲ့အစား အစာတှထေဲမှာ သံပရိုသီးပါဝငျ အောငျစားသုံးပေးလိုကျပါ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမငျနဲ့သတ်ထုဓာတျတှေ၊ အမြှငျဓာတျတှေ၊ ကယျလျဆီယမျ၊ ပိုတကျဆီယမျ၊ ဖောလိတျတို့ပါဝငျတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့အာဟာရဓာတျတှကေို ရရှိစနေိုငျပါတယျ။ ဒါတှတေငျမဟုတျဘဲ သံပရိုသီးမှာကာဘိုဟိုကျဒရိတျနဲ့သကွားဓာတျတို့လညျးပါဝငျနပေါသေးတယျ။
သံပရိုသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်စီ ၊ ပိုတက်ဆီယမ်တို့လို မျိုး နှလုံးကိုကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ သည်ဓာတ်တွေက ဆီးချိုရှိတဲ့ သူတွေမှာ နှလုံးကျန်းမာအောင် အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ သံပရိုသီးနဲ့ ရေနွေးသောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် ဇီဝတွင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမှာပါ။
အစားအစာတွေစားတဲ့အခါမှာ သံပရိုသီးလေးထည့်ပြီး စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ခံတွင်းလိုက်ပြီး လန်းဆန်းမှုကိုခံစားရစေမှာပါ။ ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့လည်း နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာထဲမှာ သံပရိုသီးထည့်စားပြီး ကျန်းမာရေးအကျိုး အာနိသင်တွေရယူလိုက်ပါ။
၁။ သံပရိုသီးရဲ့ဗီတာမင်စီက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ကျဆင်းစေနိုင် ။
သံပရိုသီးက အစားအစာတွေရဲ့အရသာကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက ဆီးချိုဝေဒနာခံစားရနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးသူတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို တော်တော်လေးလျော့ပါးစေနိုင်တာပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုရောဂါကို ကုသရာမှာအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်စီကိုလည်း သံပရိုသီးကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီကို ပုံမှန်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေနိုင်တာကြောင့် နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာထဲမှာ သံပရိုသီးလေးထည့်စားကြဖို့ ပြောပါရစေ။
၂။ သံပရိုသီးမှာပါတဲ့အမျှင်ဓာတ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး နှလုံးထိခိုက်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေနိုင် ။
သံပရိုသီးမှာ အမျှင်ဓာတ် ၂.၄ ဂရမ်ပါဝင်နေတာကြောင့် သံပရိုသီးကို စားသုံးပေးရုံနဲ့ ဆီးချိုသမားတွေမှာ လိုအပ်တဲ့အမျှင်ဓာတ်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေက အင်ဆူလင်လိုအပ်မှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောပမာဏကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကအဆာခံနိုင်စေတာကြောင့် ခဏခဏ မစားမိစေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးတွင်း သကြားဓာတ်တွေမကျဆင်းအောင်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါ တယ်။
၃။ ပိုတက်ဆီယမ်က နှလုံးပြဿ နာကင်းဝေးစေနိုင်
ပိုတက်ဆီယမ်က သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျော့ကျစေနိုင်ပြီး လေဖြတ်နိုင်ခြေနဲ့ ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တန့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာ သံပရိုသီးပါဝင်အောင် စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖြစ်လာတတ်တဲ့ နှလုံးပြဿနာတွေနဲ့ လေဖြတ်နိုင်ခြေတွေကိုကျဆင်းစေ နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေအနေနဲ့ အစာခြေစနစ်ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီးချိုဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းက ကျဆင်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ သည်လိုကျ ဆင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အစာခြေစနစ်ဖြစ်စဉ်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။
ဒါကြောင့် အခန့်မသင့်တဲ့အခါဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေဟာ စားချဉ့်ပြန်တာ၊ အစာမကြေတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံပရိုသီးတစ်စိတ်လောက်ကိုရေနွေးလေးနဲ့ သောက်သုံးပေးပြီး အစာခြေစနစ်ပြဿနာတွေနဲ့ ခပ်ကင်း ကင်းနေလိုက်ပါ။
၅။ အာဟာရစုပ်ယူမှုကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တယ်။
ဆီးချိုရောဂါသည်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်သူတွေထက် အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းပိုနည်းကြပါတယ်။ အချိုဓာတ်ကို အနည်းငယ်သာစားသုံးရတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အာဟာရ ဓာတ်တွေရရှိမှုမှာ အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိ နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သည်ပြဿနာတွေကို ပြေလည်စေဖို့ ကတော့ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစား အစာတွေထဲမှာ သံပရိုသီးပါဝင် အောင်စားသုံးပေးလိုက်ပါ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေ၊ အမျှင်ဓာတ်တွေ၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဖောလိတ်တို့ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မဟုတ်ဘဲ သံပရိုသီးမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့သကြားဓာတ်တို့လည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။
ယခုနှဈအတှကျ တောငျသူလယျသမားမြား သတိပွုရနျ
မိုးလဝေသနှငျ့ဇလဗဒေဦးစီးဌာနမှ ခနျ့မှနျးခကျြမြားအရ ယခုနှဈတှငျ မုတျသုနျလဝေငျရောကျမှု နောကျကပြွီး၊
မိုးရှာသှနျးမှုလြော့နညျးနိုငျသညျ့အတှကျ စိုကျပြိုးရရေရှိမှုနညျးပါးနိုငျကွောငျး သိရှိ ရပါသညျ။
သို့ပါ၍ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှု အခွအေနမြေားပျေါမူတညျ၍ တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျ နိုငျမညျ့
အောကျပါနညျးလမျးမြားကို ဆောငျရှကျကွရနျ အသိပေးထုတျပွနျအပျပါသညျ။
၁။ ရလေိုအပျခကျြနညျး၍ ဒသေနှငျ့ကိုကျညီသညျ့ ဈေးကှကျဝငျ သကျတမျးတိုစပါးမြိုးမြားနှငျ့ ရငေတျဒဏျခံစပါးမြိုးမြား ပွောငျးလဲစိုကျပြိုးကွရနျဖွဈပါသညျ။
၂။ အောကျပါရလေိုအပျခကျြလြော့နညျးသညျ့စိုကျပြိုးရေးနညျးစနဈမြား ပွောငျးလဲစိုကျပြိုးကွရနျ ဖွဈပါသညျ။
(ခ) တိုကျရိုကျအစခြေ့ စိုကျပြိုးနညျးစနဈ(အခွောကျ/အစို)၊
(ဂ) Drum Seeder ဖွငျ့ စိုကျပြိုးခွငျးစနဈ၊
၃။ လုပျသားအငျအားရရှိနိုငျမှုပျေါမူတညျ၍ –
(က) လုပျသားအငျအားရရှိနိုငျပါက ပြိုးသကျနုကောကျကှကျကွဲ(SRI)စနဈကို အသုံးပွုရနျ၊
( ခ) လုပျသားအငျအား အကနျ့အသတျရှိပါက တိုကျရိုကျအစခြေ့ စိုကျပြိုးနညျးစနဈ (အခွောကျ/အစို)၊ Drum Seeder ဖွငျ့ စိုကျပြိုးခွငျးစနဈနှငျ့ ကွဲခငျးစနဈမြားကို အသုံးပွုစိုကျပြိုးရနျ၊
၄။ လယျယာလုပျငနျးခှငျနှငျ့ပတျသကျ၍ အခကျအခဲမြား ကွုံတှပေ့ါက နီးစပျရာ စိုကျပြိုးရေးဦးစီး ဌာနရုံးမြား၊
စကျမှုလယျယာဦးစီးဌာနရုံးမြားနှငျ့ရုံးခြုပျ(ဖုနျး-၀၆၇-၃၄၁၀၅၂၆)သို့ ဆကျသှယျ ဆောငျရှကျကွပါရနျအသိပေးနှိုးဆျောအပျပါသညျ။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှ ခန့်မှန်းချက်များအရ ယခုနှစ်တွင် မုတ်သုန်လေဝင်ရောက်မှု နောက်ကျပြီး၊
မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းနိုင်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေရရှိမှုနည်းပါးနိုင်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
သို့ပါ၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့်
အောက်ပါနည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
၁။ ရေလိုအပ်ချက်နည်း၍ ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဈေးကွက်ဝင် သက်တမ်းတိုစပါးမျိုးများနှင့် ရေငတ်ဒဏ်ခံစပါးမျိုးများ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြရန်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အောက်ပါရေလိုအပ်ချက်လျော့နည်းသည့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(အခြောက်/အစို)၊
(ဂ) Drum Seeder ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်၊
၃။ လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ –
(က) လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်ပါက ပျိုးသက်နုကောက်ကွက်ကြဲ(SRI)စနစ်ကို အသုံးပြုရန်၊
( ခ) လုပ်သားအင်အား အကန့်အသတ်ရှိပါက တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (အခြောက်/အစို)၊ Drum Seeder ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်နှင့် ကြဲခင်းစနစ်များကို အသုံးပြုစိုက်ပျိုးရန်၊
၄။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ပါက နီးစပ်ရာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး ဌာနရုံးများ၊
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနရုံးများနှင့်ရုံးချုပ်(ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၅၂၆)သို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ကြပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ခဈြရ မှာကွောကျလို့ အပြိုကွီး လုပျသငျ့/မလုပျသငျ့ မပေနျးခြီက သူ၏ပရိသတျကွီးကို အကွံတောငျး
May 28, 2020 by Zaw Hein
တဈတုတျလေး ကတော့ သူမရဲ့ နစေ့ဉျ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှနေဲ့ ခံစားခကျြတှကေို လူမှုကှနျ ရကျစာမကျြနှာထကျကနတေဆငျ့ ပရိသတျတှေ ကို အမွဲလိုလို မြှဝပေေး နတေဲ့ အနုပညာ ရှငျတဈယောကျပါ ။ လတျတလောမှာ တော့ အခဈြ နဲ့ ပတျသတျပွီး လလေ့ာရဦး မယျ ခဈြ ရမှာ ကွောကျလို့ အပြိုကွီး လုပျသငျ့ မလုပျသငျ့ အကွံပေးပါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ။
မွနျမာဆနျဆနျ ပုံရိပျလေး အခြို့ကိုပရိသတျတှေ ကိုမြှဝပေေး လာခဲ့ပါတယျ။သူမကို အကွံပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှေ ထဲမှာ အပြိုကွီး လုပျ သငျ့တယျလို့ ပွောတဲ့ ပရိသတျ တှေ က မဲသာနတေယျလို့လညျး သူမကရေးသား ထားပါသေးတယျ ။ မပေနျးခြီကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးရော တဈတုတျလေးကို အပြိုကွီးဖွဈစခေငျြကွလား မှတျခကျြပေး ခဲ့ပါဦးနျော ..။
သူမကိုယျသူမ တဈတုတျလေး ကို အမွဲသုံးနှုနျး တတျတဲ့ မပေနျးခြီတဈယောကျ ကတော့ သူမရဲ့လှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး အလှတှေ နဲ့ သရုပျဆောငျ ပီပွငျမှုတှကွေောငျ့ အောငျမွငျနတေဲ့အနုပညာရှငျ တဈယောကျပါ ။ ပရိသတျအခဈြတျော မပေနျးခြီကတော့ ခန်ဓာကိုယျဖှံဖှံ ထှားထှားလေးနဲ့ ခဈြစရာ အရမျး ကောငျးတာကွောငျ့ ။
အကိတျလေးလို့ ပရိ သတျတှေ ကွား ရပေနျးစားနေ သူလေး ပဲဖွဈပါတယျ ။ သူမဟာ အနုပညာ လောက မှာ ရပျ တညျနေ တာ အခြိနျ အတျောကွာခဲ့ပွီးဖွဈပွီး သူမကို အား ပေးခဈြခငျတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး အမြားအပွား ပါပဲ။
Source : May panche
တစ်တုတ်လေး ကတော့ သူမရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့ ခံစားချက်တွေကို လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ ကို အမြဲလိုလို မျှဝေပေး နေတဲ့ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ လတ်တလောမှာ တော့ အချစ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာရဦး မယ် ချစ် ရမှာ ကြောက်လို့ အပျိုကြီး လုပ်သင့် မလုပ်သင့် အကြံပေးပါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ။
မြန်မာဆန်ဆန် ပုံရိပ်လေး အချို့ကိုပရိသတ်တွေ ကိုမျှဝေပေး လာခဲ့ပါတယ်။သူမကို အကြံပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ထဲမှာ အပျိုကြီး လုပ် သင့်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ပရိသတ် တွေ က မဲသာနေတယ်လို့လည်း သူမကရေးသား ထားပါသေးတယ် ။ မေပန်းချီကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရော တစ်တုတ်လေးကို အပျိုကြီးဖြစ်စေချင်ကြလား မှတ်ချက်ပေး ခဲ့ပါဦးနော် ..။
သူမကိုယ်သူမ တစ်တုတ်လေး ကို အမြဲသုံးနှုန်း တတ်တဲ့ မေပန်းချီတစ်ယောက် ကတော့ သူမရဲ့လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ သရုပ်ဆောင် ပီပြင်မှုတွေကြောင့် အောင်မြင်နေတဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ ပရိသတ်အချစ်တော် မေပန်းချီကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံဖွံ ထွားထွားလေးနဲ့ ချစ်စရာ အရမ်း ကောင်းတာကြောင့် ။
အကိတ်လေးလို့ ပရိ သတ်တွေ ကြား ရေပန်းစားနေ သူလေး ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ အနုပညာ လောက မှာ ရပ် တည်နေ တာ အချိန် အတော်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး သူမကို အား ပေးချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အများအပြား ပါပဲ။
၇ ရကျသားသမီး တဈပါတျစာဟောစာတမျး (28.5.2020 မှ 3.6.2020 အထိ)
ယခုကာလ အတှငျး အမှုအခငျး မဖွဈရနျ အထူး သတိထားပါ။ ဖွဈလြှငျ မပွီးနိုငျဘဲ ဖွဈသှားတတျသညျ။ ငှနှေငျ့ လိုကျလြှငျလညျး ရှုံးသှား တတျသညျ။ ပစ်စညျးမြား မငှား ပါနှငျ့။ မညျသို့သော အကွောငျးအရာမြားရှိရှိ အားကိုးမညျ့သူ မရှာပါနှငျ့။
ဒုက်ခပေးတတျ ပါတယျ။ အစာအဆိပျဖွဈခွငျး၊ ခွထေောကျ၊ ခါး၊ သှား ဒုက်ခပေး တတျသညျ။ ကနျြးမာရေးညံ့ခွငျး ကွုံရတတျ ပါတယျ။ ထီကံကောငျးသော ကာလဖွဈ၍ တနင်ျလာ သားသမီးနှငျ့ စပျတူ ထိုးပါ။
ယခုကာလအတှငျး အလုပျတှငျ ဆုံးရှုံးမှုတှေ မြားပွားနေ ရတတျသညျ။ ငှပြေောကျခွငျး၊ ကွှေးတငျခွငျးမြား လညျး ကွုံရတတျ ပါသညျ။ အထကျ လူကွီးမြားကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျမြား ဖွဈတတျပါသညျ။
မင်ျဂလာပှဲ အစီအစဉျမြား ရကျရှရေ့ တတျသညျ။ ကြောကျစိမျးနဲ့လုပျတဲ့ လကျဝတျရတနာမြား စတငျမဝတျသငျ့သေးပါ။ အဝတျအစားကောငျးမြား ထုတျမဝတျ ပါနှငျ့။ လူမှုရေးကိစ်စမြားတှငျ ဦးဆောငျ ဦးရှကျ မပွုရသေးပါ။
အသှားအလာ မဆငျခွငျ၍ ရနျမြား တတျပါတယျ။ အိမျထောငျရှိ သူဆိုလြှငျ အိမျထောငျဘကျက ခရီး လှနျနတေတျ ပါတယျ။ လကျရှိ အလုပျအကိုငျ ပွောငျးခငျြ စိတျမြား ပျေါလာ လိမျ့မညျ။ ပွောငျးလြှငျ ပို၍ ဆိုးရှားသှားနိုငျပါ တယျ။
သငျ့နအေိမျသို့ ကှဲကှာနေ တာကွာပွီဖွဈတဲ့ မိတျဆှမြေား လာလညျ တတျသညျ။ အခဈြရေးနဲ့ပကျသကျပွီး စိတျခမျြးသာ ရတာ မြားပါ တယျ။ ခဈြသူဆီက အမှတျရစရာ လကျဆောငျတှေ ရတတျပါတယျ။ ပညာရေးကံအားမ ရသေးပါဘူး။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၁/၈/၃ အထူးဟော စိတျပူပနျစရာတှေ မြားနတေတျ ပါတယျ။ ယတွာ သီးစုံအခဉျြဟငျးခကျြပွီး ရဟနျးသံဃာတှေ ကိုလောငျးလှူ လိုကျပါ။
ယခုကာလမြားအတှငျး အထကျလူကွီး၊ ကွီးကဲသူတို့ထံမှ အကူအညီပေးလိမျ့မညျ။ ကာလအတနျကွာဖွရှေငျး၍ ခကျခဲသော ပွဿနာမြား ပွီးမွောကျအောငျ ဖွရှေငျး နိငျမညျ။ ပျေါပေါကျလာသောအခှငျ့အရေးသဈတို့ကို လကျတှအေ့သုံးခြ၍ တိုးတတျမှု ရမညျ။
ပတျဝနျးကငျြတှငျ အပွောငျးအလဲ မြားစှာဖွဈမညျ။ ယခငျရနျ ပွဿနာဖွဈခဲ့ဘူး သူမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍လုပျရ မညျ။ သငျသညျ ပြျောရှငျစရာကောငျးသော အလုပျမြား လုပျရ လိမျ့မညျ။ ငှတှေလေညျး ရမယျ။ ကိုယျလုပျသမြှအောငျမွငျပွီး အရာထငျ တတျပါ တယျ။
အဖကျဖကျမှ စိတျခမျြးသာ စရာမြား ကွုံရတတျ ပါတယျ။ ငယျရှယျ သူမြားယခုကာလ အတှငျး အိမျထောငျ ရေးကို မစဉျးစား သငျ့သေးပါ။ခဈြသူနဲ့ အပြျောမလှနျ မိပါစနေဲ့။ စကျပစ်စညျးအဟောငျးတှေ ဝငျလာမယျ။ မွကေိစ်စ၊ အမှေ ကိစ်စတှေ စကားပွော ရမညျ။
အိမျထောငျရေး သာယာပမေယျ့ သားသမီးမြား အတှကျ စိတျပူရ တတျပါတယျ။ လူမြိုးခွား လကျအောကျ ငယျသားတို့ကွောငျ့ ပူပငျသောကေ ရာကျရ မယျ။ ငှရေေးကွေးရေး အရှုပျအထှေးမြားလညျး ပျေါပေါကျလာတတျ ပါတယျ။ အလုပျတွှေေ မာကျမွားစှာလုပျနရေမယျ။
ဝနျထမျး တှေ အဖို့ သငျတနျးတတျရခွငျး အဖှဲ့အစညျးတဈခု အတှငျး ဝငျရ ခွငျးမြား ရှိမညျ။အှနျလိုငျးကလိုအပျတဲ့ ပညာတှေ ရှာဖှသေငျယူလို့ကောငျးတဲ့ကာလ တဈခုပါပဲ။ ကနျြးမာရေးဒေါငျဒေါငျမွညျ ကောငျးနတေတျပါတယျ။ စားကောငျးအိပျပြျောမယျ့ ကာလတှပေါပဲ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၂/၆/၀ အထူးဟော ကံမွငျ့မားနေ တတျပါ တယျ။ ယတွာ ပြားရညျ ဘုရားကပျလှူပေးပါ။
ယခုကာလအတှငျး အခဈြရေးတှငျ ပြျောရှငျစရာ၊ကွညျနူးစရာ မြားနသေညျ။ ဝေးကှာနတေဲ့ ခဈြသူတှဆေုံဆညျးရတတျ ပါတယျ။ အခဈြရေးကံ အထူးကောငျးနေ၍ ခဈြသူမရှိသေး သူမြားခဈြသူကွငျဖကျနှငျ့ ဆုံတှရေ့တတျသညျ။
ပွညျတှငျး၊ နယျစပျခရီး မြားလညျး သှားလာနရေတတျသညျ။ လုပျငနျးခှငျ အတှငျး အတိုကျအခံ၊ ပွိုငျဘကျမြား ပျေါပေါကျလာ တတျပါ တယျ။ အကွီးအကဲမြား ငွိုငွငျမှုခံ ရတတျပါတယျ။ အလုပျပွောငျး၊ နရောပွောငျးလညျး ကွုံတှရေ့ နိုငျပါတယျ။
ငှကွေေးကံ အဝငျကောငျးနေ၍ ထီပေါကျသလို အမှရေသလို ငှအေစုလိုကျ၊ အပုံလိုကျဝငျကိနျးမြား ရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ငှကွေေး ဆုံးရှုံးခွငျးမြား၊ ပြောကျဆုံးခွငျးမြား ပူးတှဲကွုံ ရတတျ ပါတယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား သူခိုးခိုးခံ ရတတျ၍ သတိထားပါ။
ရှိသော ပစ်စညျးမြားကို ထုခှဲရောငျးခခြငျြ တာမြိုးရှိရငျ ဒီနမှေ့ာဆောငျရှကျလို့ကောငျးပါတယျ။အလှူမင်ျဂလာ ကိစ်စမြားတှငျ မိမိကဦးဆောငျ ပွုလုပျရမညျ။ မသငျ့မွတျသူမြားနှငျ့ ပွနျလညျသငျ့မွတျ လိမျ့မညျ။
ကောငျးတာတှလေုပျနရေငျေ တာငျမှ စှပျစှဲပွောဆို ဝဖေနျ ခွငျးမြိုးလညျး ခံရတတျ ပါတယျ။ ပညာသငျတနျးမြား တတျ‌ရောကျရကိနျး ရှိနသေညျ။ စကျပစ်စညျးမြား ဝငျလာ တတျသညျ။ ပညာ သငျတနျးမြား တတျရောကျ၍ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိမညျ။
အိမျထောငျရေးမှာတော့ အပွဈမရှာဘဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကိုယျခငျြးစာနိုငျမှအဆငျပွတေတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၃/၆/၅ အထူးဟော စုတျရောလာဘျရောဝငျမညျ။ ယတွာ သစ်စာပနျး ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ယခုကာလအတှငျး အလုပျတှမြေားပွားစှာ လုပျကိုငျနရေတတျပါသညျ။ သို့သျော မြှျောလငျ့သလောကျ ငှဝေငျခွငျး မြားမရှိဘဲ ဖွဈနပေါလိမျ့မညျ။ မိမိ၏မိသားစုထဲမှ အကွီးအကဲမြား အလုပျထဲမှ အထကျလူကွီးမြား၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ခံရတတျ ပါသညျ။
လူပြို၊ လူလှတျမြား ယခုကာလအတှငျး အိမျထောငျ မပွုသငျ့သေးပါ။မဆငျခွငျဘဲ နှဈဦးသဘောတူလကျထပျလိုကျ ခွငျးမြားကဆိုးသော အကြိုးဆကျတှဖွေဈစေ ပါတယျ။ မွအေဝငျကောငျးနိုငျသလို မွဝေယျမညျ့ သူမြားကို လိုကျလံ၍ ဆောငျ ရှကျပေးခွငျး၊
မွရေောငျးမညျ့သူမြားနှငျ့ ကိုယျကဆကျသှယျပေး လိုကျခွငျးကွောငျ့ ငှကွေေး အကြိုး အမွတျမြားစှာ ရရှိခံစား ရနိုငျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးတော့ အထူးကောငျးနေ ပါသျောလညျး အစားအသောကျ၊ အနအေထိုငျ၊ အသှားအလား ဂရုစိုကျ သငျ့ပါတယျ။
ငှကေုနျကွေးကမြားနမေညျ။ အညံ့အဆိုးမြား ရှိနပေါသေးတယျ။ အစစ၊ အရာရာသတိကွီးစှာ ထားရပါမယျ။ မိမိအပျေါမကောငျးကွံခွငျး၊ မကောငျးပွောခွငျးမြား ခံရတတျပါတယျ။ တရားရုံးတှငျ အမှုအခငျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။
အိမျထောငျရေးမှာတော့ တတျနိုငျသလောကျ ပွဿနာမဖွဈအောငျနပေါ။ ဖွဈလိုကျရငျ အကွီး အကယျြထိဖွဈသှားနိုငျလို့ပါ။ ပညာရပျတဈခု သငျကွားရခွငျး၊ အလုပျနှငျ့ပတျသကျ၍ သငျတနျးတတျရခွငျး မြိုး ကွုံရ တတျပါ တယျ။
မိမိကိုအသငျးအဖှဲ့တဈခု၊ ပါတီတဈခုမှ လာ၍ကမျးလှမျးခွငျးမြိုး ကွုံတှရေ့ တတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၄/၇/၆ အထူးဟော ကံအနညျးငယျ အညံ့တှေ ရောပါနတေတျပါတယျ။ ယတွာ အလှပွငျပစ်စညျး ကုနျနတောတှေ၊ အဟောငျးတှေ ရှိရငျ စှနျ့ပဈလိုကျပါ။
ယခုကာလအတှငျး ငှခြေေးမိပါက ပွနျမဆပျနိုငျသေးပါ။ ကိုယျကငှခြေေး လိုကျပါကလညျး ပွနျမရတတျပါ။ အသငျး အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ ကိုယျကဦးဆောငျ၊ ဦးရှကျပွုခွငျးမြား မပွုလုပျသငျ့သေးပါ။ ဘုရားကြောငျးဆောငျသနျ့ရှငျးရေးကို နံနကျ တိုငျးမှနျမှနျပွု လုပျပေးပါ။
တရားနဲ့နထေိုငျနိုငျပါကဒီအပတျမှာ ကံကောငျးမှုမြား သငျ့ထံသို့ ရောကျရှိ လာတော့မှာ သခြော နပေါပွီ။ ယခုကာလအတှငျး ခွေ၊ လကျ၊ အင်ျဂါတို့တှငျ မတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာရမှုမြား ကွုံတှရေ့နိုငျ ပါတယျ။
အနားယူခြိနျ မရလောကျအောငျပငျ အလုပျမြား အလှနျမြားပွားနရေတတျ ပါတယျ။ မိရိုးဖလာနတျမြားကိုပူဇျောပသထား သူမြား နတျ ”မ” ကိနျးရှိနေ ပါသညျ။ အိမျတှငျလညျး သော့ပကျြမြား ရှိနရေငျအမွနျဆုံးစှနျ့ပဈ လိုကျစခေငျြ ပါတယျ။
ကူညီမညျ့သူမြား သငျ့အား ဝိုငျးဝိုငျးလညျနေ လိမျ့မညျ။ မိမိတတျ သိထားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ငှရေခွငျးကိနျးမြိုး ကွုံရတတျ ပါသညျ။သငျတနျး တတျရနျ ကွံရှယျထားသူမြား ကောငျးသော အခြိနျကာလ တဈခု ဖွဈပါသညျ။
သငျတနျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကံအထူး ကောငျး နပေါတယျ။ ကိုယျကစတငျ ၍အာမခံပေးခွငျးမြိုးလုံးဝ မပွုလုပျသငျ့ပါ။အခဈြရေးမှာတော့ စနျးပှငျ့နတေတျ ပါတယျ။ မိမိထကျ ငယျတဲ့သူတှနေဲ့ အခဈြရေးပိုမိုအဆငျပွတေတျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးမှာတော့ ပနျကာလေ သိပျမခံပါနှငျ့ ။ ခေါငျးလြှျောတာကို ဆငျခွငျဆောငျရှကျပါ
အကြိုးပေးဂဏနျး ၁/ဝ/၇ အထူးဟော အဆိုးလေးတှကွေုံပွီးမှ အကောငျးဖွဈတတျပါတယျ။ ယတွာ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ယခုကာလ အတှငျးသငျသညျ မိတျဆှကေောငျး ရမညျ။ ရနျအတိုကျအခံနှငျ့ အတူ စုတျလာဘျလညျးဝငျမညျ။ စပျတူ လုပျဖျေါကိုငျဖကျမြားနှငျ့ လမျးခှဲ ရတတျသညျ။ ရှထှေကျ တတျသညျ။ အလှူရကျ၊ မင်ျဂလာရကျမြား ရှရေ့တတျ သညျ။
ယခုကာလအတှငျး အိမျပွနျဆောကျခွငျး မပွုလုပျပါ နှငျ့ဦး။ အိမျကိုပွုပွငျဖာထေးနပေါ။ နိုငျငံခွားနှငျ့ ဆကျသှယျသော ကိစ်စ အောငျမွငျ လိမျ့မညျ။ ဘုရားပုံတျော၊ ဘိုးတျော၊ မယျတျော ပုံတျောမြား ဘာသာရေးနှငျ့ ပတျသကျသော ပုံတျောမြား ဝငျလာ မညျ။
ရှထှေကျပွီး အဖိုးတနျကြောကျထညျ ပစ်စညျးမြား ပွနျဝငျ လာမညျ။ အကွီးအကဲမြား အထငျသေးသကဲ့သို့ ငယျရှယျသူတို့၏ မထမေဲ့မွငျပွုခွငျးမြိုးလညျး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ သို့သျော ဆရာကောငျး တှမေ့ညျ။ အရပျတပါးသို့ ခရီးသှားရောကျရ ကိနျးမွငျသညျ။
ဗုဒ်ဓဟူးနံဝငျသျော လူထှကျတတျသညျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြးထဲမှ နာရေးပျေါတတျသညျ။ ကိုယျဝနျဆောငျသညျမြား မီးဖှားဖို့ရှိရငျတော့ ဆရာကောငျးတှရှေိတဲ့ဆေးရုံဆေးခနျးမှာ မှေးမှပဲ အဆငျပွတေတျပါသညျ။
ယခုကာလအတှငျး အိပျယာ ကောငျးကောငျးဝယျဖို့ ကိစ်စမသငျ့လြျောသေးပါ။ ဇိမျခံ ပစ်စညျးဝငျဖို့မသငျ့လို့ပါ။ အခဈြရေးမှာတော့ေ ခတျမီသော၊ကွညျ့ကောငျးသော အမြိုးသားနှငျ့ ဆုံတှရေ့ တတျပါ တယျ။ သို့သျော ၎င်းငျးသညျ လူပြိုစဈစဈ မဟုတျဖို့မြားပါတယျ။
အိမျထောငျရေး ကံကောငျး နတေတျ ပါတယျ။ ပညာရေးမှာတော့ လိုအပျသညျ ထကျ ပိုမိုကွိုးစားဖို့လိုပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၉/၂/၆ အထူးဟော အလုပျကံလေးတှေ ပှငျ့လနျးလာတတျသညျ။ ယတွာ ပွောငျးဖူးကွျောလေးတှေ ဘုရားလှူပေးပါ။
ယခုကာလအတှငျး ငှရေေး၊ ကွေးရေး အဆငျမပွမှေုမြား ရငျဆိုငျရမညျ။ လူမြိုးခွားဒုက်ခပေးတတျသညျ။ မထငျမှတျ ထားသောခရီးမြား သှားလာရတတျသညျ။ ငှကေုနျကွေးကမြားနရေတတျသညျ။ မိမိလုပျဖျေါကိုငျဖကျမြားနှငျ့ အဆငျမပွမှေု မြား ကွုံတှနေ့ရေမညျ။
သငျသညျ ကနျြးမာရေးခြူခြာကိနျးရှိနသေညျ။ စကျပစ်စညျးမြားဝငျကိနျးရှိနပေါတယျ။ မနာလိုမှု ကွောငျ့ ရနျအတိုကျ အခံမြား ကွုံရတတျသညျ။ ဘာသာရေးနှငျ့ပတျသကျသော အသိဉာဏျမြားပှငျ့လနျးလာလိမျ့မညျ။ ပဉ်ဇငျးခံ ရတတျ သညျ။
အလုပျထဲတှငျ၊ စိတျမဝငျစားခွငျး၊ မပြျောရှငျခွငျးနှငျ့ စိတျလလှေငျ့ခွငျးမြား ဖွဈနလေိမျ့မညျ။ အလုပျပွောငျးဖို့ စိတျကူးရှိ ထားရငျ မပွောငျးသငျ့သေးပါ။ ပွောငျးလြှငျလညျး အဆငျမပွနေိုငျသေးပါ။ ပွဿနာဟောငျး၊ ရောဂါဟောငျးမြား ပွနျ ပျေါလာ တတျပါတယျ။
ယခုကာလအတှငျး အဘိုးအဘှားတှအေမှရေကိနျး ရှိနသေညျ။ ရိုးရာနတျမြားကို ပူဇျောလရှေိ့ပါက လှူဒါနျး မတ်ေတာပို့ ပေးလိုကျပါ။ ရှေ၊ ငှပြေောကျတတျသညျ။ သူခိုးခိုးခံရတတျသညျ။ ကာလရှညျကွာရငျးနှီးပေါငျးသငျးသူမြားနှငျ့ ဝိဝါဒ ကှဲပွားကာ လမျးခှဲရခွငျးမြားကွုံရမညျ။
မကျြစိနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးရောကျမညျ။ သှားနာ၊ သှားကိုကျဖွဈမညျ။ ခဈြသူနဲ့ ခြိတျဆကျထားသညျ့ ကိစ်စမြားလှဲခြျောနတေတျပါတယျ။အိမျထောငျရေးမှာတော့ သားသမီးနဲ့ပကျသကျပွီးလငျမယား နှဈယောကျစကားမြားရတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၂/၃/၈ အထူးဟော အလုပျမြား၊ကိစ်စမြားနတေတျပါတယျ။ ယတွာ ကိုယျ့ထကျနှမျးပါးသူကို ဆေးအလှူလေးတှလေုပျပေးပါ။
၇ရကျသားသမီးအပေါငျး ကောငျးသောလိုအငျဆန်ဒတှပွေညျ့ဝပါစေ ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ) 09 77 5555 695/ 09 44 5555 695
ယခုကာလ အတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်ရန် အထူး သတိထားပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ ငွေနှင့် လိုက်လျှင်လည်း ရှုံးသွား တတ်သည်။ ပစ္စည်းများ မငှား ပါနှင့်။ မည်သို့သော အကြောင်းအရာများရှိရှိ အားကိုးမည့်သူ မရှာပါနှင့်။
ဒုက္ခပေးတတ် ပါတယ်။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက်၊ ခါး၊ သွား ဒုက္ခပေး တတ်သည်။ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရတတ် ပါတယ်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်၍ တနင်္လာ သားသမီးနှင့် စပ်တူ ထိုးပါ။
ယခုကာလအတွင်း အလုပ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုတွေ များပြားနေ ရတတ်သည်။ ငွေပျောက်ခြင်း၊ ကြွေးတင်ခြင်းများ လည်း ကြုံရတတ် ပါသည်။ အထက် လူကြီးများကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များ ရက်ရွှေ့ရ တတ်သည်။ ကျောက်စိမ်းနဲ့လုပ်တဲ့ လက်ဝတ်ရတနာများ စတင်မဝတ်သင့်သေးပါ။ အဝတ်အစားကောင်းများ ထုတ်မဝတ် ပါနှင့်။ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဦးဆောင် ဦးရွက် မပြုရသေးပါ။
အသွားအလာ မဆင်ခြင်၍ ရန်များ တတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိ သူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်က ခရီး လွန်နေတတ် ပါတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင် စိတ်များ ပေါ်လာ လိမ့်မည်။ ပြောင်းလျှင် ပို၍ ဆိုးရွားသွားနိုင်ပါ တယ်။
သင့်နေအိမ်သို့ ကွဲကွာနေ တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေများ လာလည် တတ်သည်။ အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ ရတာ များပါ တယ်။ ချစ်သူဆီက အမှတ်ရစရာ လက်ဆောင်တွေ ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံအားမ ရသေးပါဘူး။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၈/၃ အထူးဟော စိတ်ပူပန်စရာတွေ များနေတတ် ပါတယ်။ ယတြာ သီးစုံအချဉ်ဟင်းချက်ပြီး ရဟန်းသံဃာတွေ ကိုလောင်းလှူ လိုက်ပါ။
ယခုကာလများအတွင်း အထက်လူကြီး၊ ကြီးကဲသူတို့ထံမှ အကူအညီပေးလိမ့်မည်။ ကာလအတန်ကြာဖြေရှင်း၍ ခက်ခဲသော ပြဿနာများ ပြီးမြောက်အောင် ဖြေရှင်း နိင်မည်။ ပေါ်ပေါက်လာသောအခွင့်အရေးသစ်တို့ကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ တိုးတတ်မှု ရမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပြောင်းအလဲ များစွာဖြစ်မည်။ ယခင်ရန် ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူး သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍လုပ်ရ မည်။ သင်သည် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော အလုပ်များ လုပ်ရ လိမ့်မည်။ ငွေတွေလည်း ရမယ်။ ကိုယ်လုပ်သမျှအောင်မြင်ပြီး အရာထင် တတ်ပါ တယ်။
အဖက်ဖက်မှ စိတ်ချမ်းသာ စရာများ ကြုံရတတ် ပါတယ်။ ငယ်ရွယ် သူများယခုကာလ အတွင်း အိမ်ထောင် ရေးကို မစဉ်းစား သင့်သေးပါ။ချစ်သူနဲ့ အပျော်မလွန် မိပါစေနဲ့။ စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ ဝင်လာမယ်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေ ကိစ္စတွေ စကားပြော ရမည်။
အိမ်ထောင်ရေး သာယာပေမယ့် သားသမီးများ အတွက် စိတ်ပူရ တတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား လက်အောက် ငယ်သားတို့ကြောင့် ပူပင်သောကေ ရာက်ရ မယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အရှုပ်အထွေးများလည်း ပေါ်ပေါက်လာတတ် ပါတယ်။ အလုပ်တြွေေ မာက်မြားစွာလုပ်နေရမယ်။
ဝန်ထမ်း တွေ အဖို့ သင်တန်းတတ်ရခြင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အတွင်း ဝင်ရ ခြင်းများ ရှိမည်။အွန်လိုင်းကလိုအပ်တဲ့ ပညာတွေ ရှာဖွေသင်ယူလို့ကောင်းတဲ့ကာလ တစ်ခုပါပဲ။ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည် ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ စားကောင်းအိပ်ပျော်မယ့် ကာလတွေပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၆/၀ အထူးဟော ကံမြင့်မားနေ တတ်ပါ တယ်။ ယတြာ ပျားရည် ဘုရားကပ်လှူပေးပါ။
ယခုကာလအတွင်း အချစ်ရေးတွင် ပျော်ရွှင်စရာ၊ကြည်နူးစရာ များနေသည်။ ဝေးကွာနေတဲ့ ချစ်သူတွေဆုံဆည်းရတတ် ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံ အထူးကောင်းနေ၍ ချစ်သူမရှိသေး သူများချစ်သူကြင်ဖက်နှင့် ဆုံတွေ့ရတတ်သည်။
ပြည်တွင်း၊ နယ်စပ်ခရီး များလည်း သွားလာနေရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း အတိုက်အခံ၊ ပြိုင်ဘက်များ ပေါ်ပေါက်လာ တတ်ပါ တယ်။ အကြီးအကဲများ ငြိုငြင်မှုခံ ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်းလည်း ကြုံတွေ့ရ နိုင်ပါတယ်။
ငွေကြေးကံ အဝင်ကောင်းနေ၍ ထီပေါက်သလို အမွေရသလို ငွေအစုလိုက်၊ အပုံလိုက်ဝင်ကိန်းများ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငွေကြေး ဆုံးရှုံးခြင်းများ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းများ ပူးတွဲကြုံ ရတတ် ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ သူခိုးခိုးခံ ရတတ်၍ သတိထားပါ။
ရှိသော ပစ္စည်းများကို ထုခွဲရောင်းချချင် တာမျိုးရှိရင် ဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အလှူမင်္ဂလာ ကိစ္စများတွင် မိမိကဦးဆောင် ပြုလုပ်ရမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ် လိမ့်မည်။
ကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ေ တာင်မှ စွပ်စွဲပြောဆို ဝေဖန် ခြင်းမျိုးလည်း ခံရတတ် ပါတယ်။ ပညာသင်တန်းများ တတ်‌ရောက်ရကိန်း ရှိနေသည်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝင်လာ တတ်သည်။ ပညာ သင်တန်းများ တတ်ရောက်၍ အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အပြစ်မရှာဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မှအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၆/၅ အထူးဟော စုတ်ရောလာဘ်ရောဝင်မည်။ ယတြာ သစ္စာပန်း ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း အလုပ်တွေများပြားစွာ လုပ်ကိုင်နေရတတ်ပါသည်။ သို့သော် မျှော်လင့်သလောက် ငွေဝင်ခြင်း များမရှိဘဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏မိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲများ အလုပ်ထဲမှ အထက်လူကြီးများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ခံရတတ် ပါသည်။
လူပျို၊ လူလွတ်များ ယခုကာလအတွင်း အိမ်ထောင် မပြုသင့်သေးပါ။မဆင်ခြင်ဘဲ နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်လိုက် ခြင်းများကဆိုးသော အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေ ပါတယ်။ မြေအဝင်ကောင်းနိုင်သလို မြေဝယ်မည့် သူများကို လိုက်လံ၍ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊
မြေရောင်းမည့်သူများနှင့် ကိုယ်ကဆက်သွယ်ပေး လိုက်ခြင်းကြောင့် ငွေကြေး အကျိုး အမြတ်များစွာ ရရှိခံစား ရနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးတော့ အထူးကောင်းနေ ပါသော်လည်း အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အသွားအလား ဂရုစိုက် သင့်ပါတယ်။
ငွေကုန်ကြေးကျများနေမည်။ အညံ့အဆိုးများ ရှိနေပါသေးတယ်။ အစစ၊ အရာရာသတိကြီးစွာ ထားရပါမယ်။ မိမိအပေါ်မကောင်းကြံခြင်း၊ မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်ပါတယ်။ တရားရုံးတွင် အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေပါ။ ဖြစ်လိုက်ရင် အကြီး အကျယ်ထိဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။ ပညာရပ်တစ်ခု သင်ကြားရခြင်း၊ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းတတ်ရခြင်း မျိုး ကြုံရ တတ်ပါ တယ်။
မိမိကိုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခု၊ ပါတီတစ်ခုမှ လာ၍ကမ်းလှမ်းခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့ရ တတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၇/၆ အထူးဟော ကံအနည်းငယ် အညံ့တွေ ရောပါနေတတ်ပါတယ်။ ယတြာ အလှပြင်ပစ္စည်း ကုန်နေတာတွေ၊ အဟောင်းတွေ ရှိရင် စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း ငွေချေးမိပါက ပြန်မဆပ်နိုင်သေးပါ။ ကိုယ်ကငွေချေး လိုက်ပါကလည်း ပြန်မရတတ်ပါ။ အသင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကိုယ်ကဦးဆောင်၊ ဦးရွက်ပြုခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်သေးပါ။ ဘုရားကျောင်းဆောင်သန့်ရှင်းရေးကို နံနက် တိုင်းမှန်မှန်ပြု လုပ်ပေးပါ။
တရားနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါကဒီအပတ်မှာ ကံကောင်းမှုများ သင့်ထံသို့ ရောက်ရှိ လာတော့မှာ သေချာ နေပါပြီ။ ယခုကာလအတွင်း ခြေ၊ လက်၊ အင်္ဂါတို့တွင် မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ကြုံတွေ့ရနိုင် ပါတယ်။
အနားယူချိန် မရလောက်အောင်ပင် အလုပ်များ အလွန်များပြားနေရတတ် ပါတယ်။ မိရိုးဖလာနတ်များကိုပူဇော်ပသထား သူများ နတ် ”မ” ကိန်းရှိနေ ပါသည်။ အိမ်တွင်လည်း သော့ပျက်များ ရှိနေရင်အမြန်ဆုံးစွန့်ပစ် လိုက်စေချင် ပါတယ်။
ကူညီမည့်သူများ သင့်အား ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေ လိမ့်မည်။ မိမိတတ် သိထားနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေရခြင်းကိန်းမျိုး ကြုံရတတ် ပါသည်။သင်တန်း တတ်ရန် ကြံရွယ်ထားသူများ ကောင်းသော အချိန်ကာလ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကံအထူး ကောင်း နေပါတယ်။ ကိုယ်ကစတင် ၍အာမခံပေးခြင်းမျိုးလုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါ။အချစ်ရေးမှာတော့ စန်းပွင့်နေတတ် ပါတယ်။ မိမိထက် ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ အချစ်ရေးပိုမိုအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးမှာတော့ ပန်ကာလေ သိပ်မခံပါနှင့် ။ ခေါင်းလျှော်တာကို ဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ပါ
အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/ဝ/၇ အထူးဟော အဆိုးလေးတွေကြုံပြီးမှ အကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယတြာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ယခုကာလ အတွင်းသင်သည် မိတ်ဆွေကောင်း ရမည်။ ရန်အတိုက်အခံနှင့် အတူ စုတ်လာဘ်လည်းဝင်မည်။ စပ်တူ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။ ရွှေထွက် တတ်သည်။ အလှူရက်၊ မင်္ဂလာရက်များ ရွှေ့ရတတ် သည်။
ယခုကာလအတွင်း အိမ်ပြန်ဆောက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ နှင့်ဦး။ အိမ်ကိုပြုပြင်ဖာထေးနေပါ။ နိုင်ငံခြားနှင့် ဆက်သွယ်သော ကိစ္စ အောင်မြင် လိမ့်မည်။ ဘုရားပုံတော်၊ ဘိုးတော်၊ မယ်တော် ပုံတော်များ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ပုံတော်များ ဝင်လာ မည်။
ရွှေထွက်ပြီး အဖိုးတန်ကျောက်ထည် ပစ္စည်းများ ပြန်ဝင် လာမည်။ အကြီးအကဲများ အထင်သေးသကဲ့သို့ ငယ်ရွယ်သူတို့၏ မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သို့သော် ဆရာကောင်း တွေ့မည်။ အရပ်တပါးသို့ ခရီးသွားရောက်ရ ကိန်းမြင်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနံဝင်သော် လူထွက်တတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှ နာရေးပေါ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ မီးဖွားဖို့ရှိရင်တော့ ဆရာကောင်းတွေရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းမှာ မွေးမှပဲ အဆင်ပြေတတ်ပါသည်။
ယခုကာလအတွင်း အိပ်ယာ ကောင်းကောင်းဝယ်ဖို့ ကိစ္စမသင့်လျော်သေးပါ။ ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းဝင်ဖို့မသင့်လို့ပါ။ အချစ်ရေးမှာတော့ေ ခတ်မီသော၊ကြည့်ကောင်းသော အမျိုးသားနှင့် ဆုံတွေ့ရ တတ်ပါ တယ်။ သို့သော် ၎င်းသည် လူပျိုစစ်စစ် မဟုတ်ဖို့များပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်း နေတတ် ပါတယ်။ ပညာရေးမှာတော့ လိုအပ်သည် ထက် ပိုမိုကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၂/၆ အထူးဟော အလုပ်ကံလေးတွေ ပွင့်လန်းလာတတ်သည်။ ယတြာ ပြောင်းဖူးကြော်လေးတွေ ဘုရားလှူပေးပါ။
ယခုကာလအတွင်း ငွေရေး၊ ကြေးရေး အဆင်မပြေမှုများ ရင်ဆိုင်ရမည်။ လူမျိုးခြားဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မထင်မှတ် ထားသောခရီးများ သွားလာရတတ်သည်။ ငွေကုန်ကြေးကျများနေရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် အဆင်မပြေမှု များ ကြုံတွေ့နေရမည်။
သင်သည် ကျန်းမာရေးချူချာကိန်းရှိနေသည်။ စက်ပစ္စည်းများဝင်ကိန်းရှိနေပါတယ်။ မနာလိုမှု ကြောင့် ရန်အတိုက် အခံများ ကြုံရတတ်သည်။ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အသိဉာဏ်များပွင့်လန်းလာလိမ့်မည်။ ပဉ္ဇင်းခံ ရတတ် သည်။
အလုပ်ထဲတွင်၊ စိတ်မဝင်စားခြင်း၊ မပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် စိတ်လေလွင့်ခြင်းများ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အလုပ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိ ထားရင် မပြောင်းသင့်သေးပါ။ ပြောင်းလျှင်လည်း အဆင်မပြေနိုင်သေးပါ။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းများ ပြန် ပေါ်လာ တတ်ပါတယ်။
ယခုကာလအတွင်း အဘိုးအဘွားတွေအမွေရကိန်း ရှိနေသည်။ ရိုးရာနတ်များကို ပူဇော်လေ့ရှိပါက လှူဒါန်း မေတ္တာပို့ ပေးလိုက်ပါ။ ရွှေ၊ ငွေပျောက်တတ်သည်။ သူခိုးခိုးခံရတတ်သည်။ ကာလရှည်ကြာရင်းနှီးပေါင်းသင်းသူများနှင့် ဝိဝါဒ ကွဲပြားကာ လမ်းခွဲရခြင်းများကြုံရမည်။
မျက်စိနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းရောက်မည်။ သွားနာ၊ သွားကိုက်ဖြစ်မည်။ ချစ်သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိစ္စများလွဲချော်နေတတ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ သားသမီးနဲ့ပက်သက်ပြီးလင်မယား နှစ်ယောက်စကားများရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၃/၈ အထူးဟော အလုပ်များ၊ကိစ္စများနေတတ်ပါတယ်။ ယတြာ ကိုယ့်ထက်နွမ်းပါးသူကို ဆေးအလှူလေးတွေလုပ်ပေးပါ။
၇ရက်သားသမီးအပေါင်း ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ) 09 77 5555 695/ 09 44 5555 695
ဖုနျးအစှဲလှနျရောဂါ Nomophobia ကို ဘယျလို ကုသနိုငျမလဲ?
ဖုနျးတှဟော အခကျြအလကျ တှကေို ရယူဖို့ ကိရိယာတဈခု ဖွဈတယျဆိုတာထကျ ပိုလာပါတယျ ။ သငျကိုယျတိုငျ ဖုနျးတဈလုံး မရှိရငျ မနနေိုငျဘူး နတေို့ငျး ဖုနျးနဲ့အခြိနျကုနျ အိပျလညျးဖုနျး စားလညျးဖုနျး သငျ့ဘဝရဲ့မရှိမဖွဈအရာတဈခုလို ခံစားနရေပီဆို သငျ ဖုနျးအစှဲလှနျ ရောဂါရနတောဖွဈနိုငျပါတယျ ။ Nomophobiaလို့ချေါတဲ့ no mobile phone phobia ဆိုတဲ့ရောဂါကို လူတျောတျောမြားမြားရနကွေပွီလို့ဆိုပါတယျ ။
နယူးယောကျတိုငျမး သတငျးစာအဆိုအရ ဆယျကြျောသကျတှနေဲ့လူကွီးတှကေ သူတို့ဖုနျးတှကေို တဈနမှေ့ာ အကွိမျလောကျကွညျ့ကွပွီး စာသားမကျဆေ့ ၁၁၀ ခနျ့ပေးပို့တတျကွပါတယျ။ အမရေိကနျမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့စဈတမျးတှအေရ လူဦးရေ ၂၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျက အငျတာနကျစှဲလမျးခွငျးပွဿနာတကျနကွေတယျလို့ဆိုပါတယျ။ လူဦးရေ ၅၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျကတော့ သူတို့ဖုနျးတှမေရှိပဲ ရှငျသနျနိုငျမှာမဟုတျလို့ ပွောကွားခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ ခုပွောပွခငျြတာက ဒီအငျတာနကျ ဖုနျး စှဲလမျးမှုရောဂါကို ကြှနျတျောတို့ ဘယျလိုတိုကျထုတျနိုငျကွမလဲလို့ပွောတာပါ ။
စမတျဖုနျးစှဲလမျးတာကို တဈကယျကတော့ရပျတနျ့ဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ခတျေရဲ့လိုအပျခကျြအရ ဒီဖုနျးတှေ ကှနျပွုတာတှေ လိုအပျကွတယျဆိုပမေယျ့ အရမျးအစှဲလှနျသှားရငျ မကောငျးပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုကိုယျမေးခှနျးပွနျမေးပီးသတိပေးဖို့လိုတာက ဖုနျးတှမေပါပဲကြှနျတျောတို့ ရှငျသနျခဲ့ကွဖူးတယျဆိုတာပါပဲ ။
သငျ့ရဲ့ဖုနျး အစှဲလှနျ ရောဂါကို ကုလို့ ရမယျ့ နညျးလမျး ၄ ခု ကိုပွောပွခငျြပါတယျ
၁-ညအခြိနျမှာ သငျ့ဖုနျးကို သငျ့ရဲ့အိပျရာဘေး ဒါမှမဟုတျ အခနျးမှာမထားပါနဲ့ ။ ဘတျထရီကို ဖွုတျထားပီး သငျနဲ့ဝေးဝေးမှာထားပါ။ ဒါမှဖုနျးရဲ့သှေးဆောငျမှုကို သငျမခံရတော့မွှာဖဈပါတယျ..
၂-သငျ့ဖုနျးမပါပဲသှားလို့ရမယျ့အရာတှေ နရောတှကေို လကေ့ငျြ့ပီး ဖုနျးမယူသှားပဲသှားကွညျ့ပါ။ အတိတျတခြိနျကနရေ့ကျတှေ ရှေးတုနျးကခံစားမှုတှကေို သငျပွနျခံစားရပါလိမျ့မယျ။
၃-ဖုနျးမှဖုနျးဖွဈနတေဲ့လူတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ စိတျကရြောဂါကိုခံစားနရေပွီး စိတျဝဒေနာတှခေံစားနိုငျရတယျလို့ဆိုပါတယျ၊ သူတို့ရဲ့အထီးကနျြမှုကွောငျ့အဲ့ဒီလိုတှဖွေဈလာတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးသုံးစှဲနတေဲ့အခြိနျတှကေို လကျတှဘေ့ဝထဲအစားထိုး သုံးစှဲကွညျ့လိုကျပါ၊ အစဈအမှနျဘဝက ဘယျလောကျပြျောစရာကောငျးတယျဆိုတာ သငျစတငျခံစားလာရပါလိမျ့မယျ.
၄-သငျ့ဝါသနာကို အပွငျလကျတှဘေ့ဝမှာရှာပါ။ ဖုနျးထဲမှာ အခြိနျကုနျမနပေါနဲ့တော့။Like Commentနဲ့လူတှေ အထငျကွီးစတေဲ့အရာတှလေုပျလညျး လကျတှကေ့လကျတှဘေ့ဝမို့ သငျ့အတှကျ အာရုံစိုကျစရာတဈခုခုကို အပွငျလောကမှာရှာဖှဖေို့လိုပါတယျ။ ဖုနျးသုံးခြိနျတှကေိုတငျးကွပျတဲ့ အခြိနျ ကနျ့သတျကွညျ့ပါနျော..ကဲဒီလောကျဆို ဖုနျးအစှဲလှနျရောဂါကိုဘယျလိုရပျတနျ့နိုငျမလဲသိလောကျပီထငျပါတယျ.
ဖုန်းတွေဟာ အချက်အလက် တွေကို ရယူဖို့ ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုလာပါတယ် ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းတစ်လုံး မရှိရင် မနေနိုင်ဘူး နေ့တိုင်း ဖုန်းနဲ့အချိန်ကုန် အိပ်လည်းဖုန်း စားလည်းဖုန်း သင့်ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုလို ခံစားနေရပီဆို သင် ဖုန်းအစွဲလွန် ရောဂါရနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Nomophobiaလို့ခေါ်တဲ့ no mobile phone phobia ဆိုတဲ့ရောဂါကို လူတော်တော်များများရနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ် ။
နယူးယောက်တိုင်မး သတင်းစာအဆိုအရ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လူကြီးတွေက သူတို့ဖုန်းတွေကို တစ်နေ့မှာ အကြိမ်လောက်ကြည့်ကြပြီး စာသားမက်ဆေ့ ၁၁၀ ခန့်ပေးပို့တတ်ကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရ လူဦးရေ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်းပြဿနာတက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူဦးရေ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ သူတို့ဖုန်းတွေမရှိပဲ ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက ဒီအင်တာနက် ဖုန်း စွဲလမ်းမှုရောဂါကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်နိုင်ကြမလဲလို့ပြောတာပါ ။
စမတ်ဖုန်းစွဲလမ်းတာကို တစ်ကယ်ကတော့ရပ်တန့်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ ဒီဖုန်းတွေ ကွန်ပြုတာတွေ လိုအပ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းအစွဲလွန်သွားရင် မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းပြန်မေးပီးသတိပေးဖို့လိုတာက ဖုန်းတွေမပါပဲကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်ခဲ့ကြဖူးတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
သင့်ရဲ့ဖုန်း အစွဲလွန် ရောဂါကို ကုလို့ ရမယ့် နည်းလမ်း ၄ ခု ကိုပြောပြချင်ပါတယ်
၁-ညအချိန်မှာ သင့်ဖုန်းကို သင့်ရဲ့အိပ်ရာဘေး ဒါမှမဟုတ် အခန်းမှာမထားပါနဲ့ ။ ဘတ်ထရီကို ဖြုတ်ထားပီး သင်နဲ့ဝေးဝေးမှာထားပါ။ ဒါမှဖုန်းရဲ့သွေးဆောင်မှုကို သင်မခံရတော့မြှာဖစ်ပါတယ်..
၂-သင့်ဖုန်းမပါပဲသွားလို့ရမယ့်အရာတွေ နေရာတွေကို လေ့ကျင့်ပီး ဖုန်းမယူသွားပဲသွားကြည့်ပါ။ အတိတ်တချိန်ကနေ့ရက်တွေ ရှေးတုန်းကခံစားမှုတွေကို သင်ပြန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၃-ဖုန်းမှဖုန်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေက များသောအားဖြင့် စိတ်ကျရောဂါကိုခံစားနေရပြီး စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနိုင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့အထီးကျန်မှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းသုံးစွဲနေတဲ့အချိန်တွေကို လက်တွေ့ဘဝထဲအစားထိုး သုံးစွဲကြည့်လိုက်ပါ၊ အစစ်အမှန်ဘဝက ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သင်စတင်ခံစားလာရပါလိမ့်မယ်.
၄-သင့်ဝါသနာကို အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာရှာပါ။ ဖုန်းထဲမှာ အချိန်ကုန်မနေပါနဲ့တော့။Like Commentနဲ့လူတွေ အထင်ကြီးစေတဲ့အရာတွေလုပ်လည်း လက်တွေ့ကလက်တွေ့ဘဝမို့ သင့်အတွက် အာရုံစိုက်စရာတစ်ခုခုကို အပြင်လောကမှာရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်။ ဖုန်းသုံးချိန်တွေကိုတင်းကြပ်တဲ့ အချိန် ကန့်သတ်ကြည့်ပါနော်..ကဲဒီလောက်ဆို ဖုန်းအစွဲလွန်ရောဂါကိုဘယ်လိုရပ်တန့်နိုင်မလဲသိလောက်ပီထင်ပါတယ်.
ခံတှငျးက ရောဂါပိုးနှငျ့အဆိပျတှကေို ဖယျထုတျရှငျးလငျးဖို့အကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ ဆျီနဲ့ပလုတျကငျြးပေးခွငျး၏ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးမြား
ခံတှငျးက ရောဂါပိုးနှငျ့အဆိပျတှကေို ဖယျထုတျရှငျးလငျးဖို့အကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ ဆီနဲ့ပလုတျကငျြးပေးခွငျး၏ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးမြား
တနျဖိုးထားရပါသောမိတျဆှမြေားအား မိမိတို့၏ခံတှငျးကို အုနျးဆီ နှမျးဆီ သံလှငျဆီတဈမြိုးမြိုးဖွငျ့ တဈပတျလြှငျနှဈကွိမျသုံးကွိမျခနျ့ ပလုတျကငျြးပေးခွငျးဖွငျ့ ပွနျလညျရရှိမညျ့
ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ ခံတှငျးက အာပုတျရညျမြား အစာအိမျသို့ မရောကျရှိတော့ဘဲ အစာအိမျရောဂါနှငျ့ကငျဆာရောဂါကိုပါ ကာကှယျပွီးသားဖွဈပါကွောငျး ပွောပွဆှေးနှေးလိုပါတယျခငျဗြာ
ကြှနျတျောတိုိ့ငယျငယျတုနျးကမွနျမာပွညျမှာ မွနျမာဆရာဝနျမြားနှငျ့အတူ အိန်ဒိယနိုငျငံကပနျခြာဘီဆရာဝနျတှပေါ ဆေးရုံ ဆေးပေးခနျးတှမှော အမြားအပွားတှရှေိ့ရတတျတာကို ကောငျးစှာ မှတျမိနပေါသေးတယျ
ကြှနျတျောငယျငယျကနယေ့နတေို့ငျး ကောငျးကောငျးမှတျမိနသေေးတာက ကြှနျတေျာ့အမဒေူးအရမျးနာနေ၍ ပခုက်ကူမွို့ထငျးတနျးရပျမှာ ဆေးခနျးဖှငျ့ထားတဲ့ ပနျခြာဘီဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာမာဒေးထံသို့ သှားရောကျပွသခဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ
အမေ၏ဒူးတဈဘကျကရောငျကိုငျးနပွေီး လမျးတောငျမလြှောကျနိုငျလို့ ဆေးခနျးသှားမယျဆိုရငျလညျးအမကေို ဦးလေးတှကေခြီမပွီးချေါသှားလရှေိ့ပါတယျ
ဆရာဝနျကွီးဒေါကျတာမာဒေးမှအမကေို သသေခြောခြာ စဈဆေးပွီးနောကျ သှားတှကေောငျးရဲ့လားလို့မေးတော့ အမမေကျြနာအမူအရာက ဒူးနာတာနဲ့သှားကောငျးတာမကောငျးတာ ဆိုငျလို့လားဟုထငျနဟေနျတူပါတယျ
ဆရာဝနျကွီးက ပါးစပျဟစမျးဆိုတော့ အံသှားပေါကျတှကေိုတှသှေ့ားပါတယျ အံသှားတှကေပွညျပုပျတှဟော ဒူးကိုရောကျသှားပွီး ဒူးနာတဲ့ပွဿနာကိုဖွဈစတောပါပဲ
ထိုသှားတှကေိုဖာထေးပွုပွငျလိုကျတော့ အမဒေူးနာလညျးကောငျးသှားတာကို လကျတှမွေ့ငျတှခေဲ့ရဘူးပါတယျ
ဆကျလကျ၍ဒေါကျတာမာဒေးမှအမအေား နစေ့ဉျ နှမျးဆီ ဟငျးစားဇှနျးတဈဇှနျးဖွငျ့ ပလုတျကငျြးခိုငျးရာ အမဒေူးနာပွနျမဖွဈတော့တာကိုလညျး သတိထားမိပါတယျ
နောကျတဈယောကျကတော့ သိုငျးရှိုကျရောဂါဖွဈတဲ့ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှတေဈယောကျပါပဲ သူ့ရဲ့သိုငျးရှိုကျဂလငျးကနေ ဟိုမုနျးအထှကျနဲတော့ လူကလေးလံထိုငျးမှိုငျးပွီး ကိုယျအလေးခြိနျလညျးတကျလာတယျ
ရုပျပါပွောငျးသှားလို့သူ့ကိုမမှတျမိနိုငျပါဘူး ခံတှငျးကဗကျတီးရီးယားနဲ့အဆိပျတှကေ သိုငျးရှိုကျဂလငျးရဲ့Pumpတှကေို blockလုပ်ထားလို့
ဟိုမုနျးကောငျးကောငျးမထှကျတဲ့အတှကျ သှားဆရာဝနျဆီမှာ သခြောကုသလိုကျတဲ့နောကျမှာတော့ ပွနျကောငျးသှားတာကိုတှရှေိ့ရပါတယျ
သူလညျးသံလှငျဆီကို နစေ့ဉျဟငျးစားဇှနျးတဈဇှနျးစာဖွငျ့ ဆယျမိနဈခနျ့ပလုတျကငျြးရာ ပွနျပွီးရောဂါမဖွဈတော့တာကို လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ
ထပျမှနျ၍ ကြောကျကပျရောငျနတေဲ့ သူတဈယောကျအကွောငျးကို ပွောပွဆှေးနှေးလိုပါသေးတယျ
သူ့မှာကြောကျကပျက ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတော့လူကဖောသှပျသှပျဖွဈလာပွီး မကျြခှံပါမို့ပွီးရုပျပါပွောငျးသှားပါတယျ
ခွထေောကျတှကေလညျး ဖောပွီးရောငျကိုငျးနပေါတော့တယျ ကြောကျကပျဆေးတှသေောကျလညျး လူကသိပျမသကျသာရှာပါဘူး တဈနေ့ သူသှားအရမျးနာနလေို့
သှားဆရာဝနျကိုသှားရောကျပွသတဲ့ အခါကွတော့မှ သှားဆရာဝနျတှကေ သူ့ပါးစပျထဲမှာပကျြစီးနတေဲ့သှားနဲ့ သှားဖုံးတှကေိုပွနျကောငျးအောငျ ကုပေးလိုကျတော့မှ ကြောကျကပျလညျးပွနျကောငျးသှားတာကိုတှရှေိ့ရပါတယျ
ကြှနျတျောနဲ့အရမျးခငျမငျတဲ့ ငယျသူငယျခငျြးတဈယောကျလညျး ငယျငယျကတညျးက ပါးစပျတျောတျောနံတဲ့သူတဈယောကျပါပဲ ဘယျလောကျတောငျးနံသလညျးဆိုရငျ
ပငျြးသူဖွဈတဲ့အတှကျ နှဈတှကွောလာတော့ ခံတှငျးရောဂါခံစားလာရတာဖွဈပါတယျ
ခံတှငျးရောဂါတှနေဲ့သူငယျခငျြးဟာ ငယျငယျကတညျးကလညျး သိပျမကနျြးမာရှာတဲ့အတှကျ အသကျ(၄၅)နှဈလောကျမှာဘဲ ဆုံးသှားတာကိုတှခေဲ့ရဘူးပါတယျ
ယခုအခြိနျအခါမှာလညျး ရာသီဥတုအစားအသောကျ အပွုအမူအနအေထိုငျတှကွေောငျ့ လူတျောတျောမြားမြားဖွဈနတေဲ့
ရောဂါဝဒေနာတှကေတော့ အသညျးရောဂါ အဆုတျရောဂါ အစာအိမျ ကြောကျကပျ နှလုံး အူလမျးကွောငျး၊ဆီးခြိုနှလုံးသှေးကွော
ဦးနှောကျ၊အသကျရှူလမျးကွောငျး၊ ဆီးလမျးကွောငျးနဲ့ကငျဆာရောဂါမြိုးစုံ အရိုးအဆဈနာကငျြကိုကျခဲခွငျးတို့ဟာ ခံတှငျးမှာရှိနတေဲ့ ဗကျတီးရီးယားရောဂါပိုးမှားတှကေနေ
ထုတျပေးလိုကျတဲ့အဆိပျတှကွေောငျ့ အမြားဆုံးဖွဈနကွေတာကို အားလုံးသတိထားမိစခေငျြပါတယျ
ခံတှငျးမသနျ့လရေောဂါထူလဘေဲဖွဈပွီး ပါးစပျနံလရေောဂါမြားလေ အသကျတိုလပေဲဖွဈပါတယျ
သှားဖုံးအရငျးမှာ အစိမျးရောငျအဝါရောငျရှိတဲ့ပွညျတှထေဲမှာ အလှနျအဆိပျပွငျးတဲ့ရောဂါပိုးတှရှေိပါတယျ ဒါကွောငျ့ခံတှငျးထဲဗကျတီးရီးယားတှကေို အမွဲတနျးရှငျးလငျးပေးဖို့လိုအပျပါတယျ
ခံတှငျးကရောဂါပိုးနဲ့အဆိပျတှကေို ဖယျထုတျရှငျးလငျးဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးကတော့ အုနျးဆီ နှမျးဆီ သံလှငျဆီတို့ဖွငျ ပလုတျကငျြးပေးခွငျးဖွဈပါတယျ
ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဆီကအဆိပျစုပျအားကောငျးပွီး သှားတှအေကွားနဲ့သှားဖုံးရငျးတှမှော အိမျဖှဲ့နကွေတဲ့အဏုဇီဝရောဂါပိုးတှကေို ဆီကဆှဲထုတျပေးနိုငျလိုဘဲဖွဈပါတယျ
နံနကျစောစောအိပျယာထတာနဲ့ ဆီတဈငုံစာကို၁၀မိနဈလောကျငုံထားပွီး ပလုတျကငျြးပေးပါက ရောဂါပိုးတှထှေကျသှားလိမျ့ပါမယျ
ထိုကဲ့သို့ဆီဖွငျ့ပလုပျကငျြးပွီးမှ သှားတိုကျတာသညျအကောငျးဆုံးပါပဲ ပလုပျကငျြးပွီးရငျတော့ ရနှေေးနှေးလေးဖွငျ့ပါစပျကို ပွနျလညျဆေးကွောပေးရငျဖွငျ့ အကောငျးဆုံးပါပဲခငျဗြာ
ပလုတျကငျြးဖို့အကောငျးဆုံးဆီကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာအလှယျတကူဝယျလို့ရတဲ့ အုနျးဆီဘဲဖွဈပါတယျ
အုနျးဆီအပွငျသံလှငျဆီ၊နှမျးဆီတှနေဲ့လညျး ပလုတျကငျြးလို့လညျးရပါတယျ ပဲဆီ နကွောဆီ စားအုနျးဆီတှနေဲ့တော့ ပလုတျမကငျြးစခေငျြပါဘူးခငျဗြာ
ကြှနျတေျာ့၏မိတျဆှမြေားအနဖွေငျ့ ဆီဖွငျ့ပလုပျကငျြးတာကို နစေ့ဉျမလုပျနိုငျရငျတောငျမှ တဈပတျကို(၂)ခါ(၃)ခါလောကျ လုပျပေးသငျ့တယျဟုအကွံပေးလိုပါတယျ
ယခုအခါဆီနဲ့ပလုပျကငျြးပွီး ခံတှငျးသနျ့ရှငျးအောငျပွုလုပျကာ ကနျြးမာနထေိုငျတဲ့နညျးကို နိုငျငံတျောတျောမြားမြားအထူးသဖွငျ့ ထိုငျနိုငျငံမှာလကျခံကငျြ့သုံးနတောကို သိရှိရပါတယျခငျဗြာ
ကြှနျတေျာ့၏မိတျဆှမြေားအနဖွေငျ့ ခံတှငျးမသနျ့လေ ကနျြးမာရေးထူလဆေိုတာကိုသတိပွုပွီး ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး၏ကနျြးမာရေးအတှကျ ခံတှငျးကိုသနျ့ရှငျအောငျထားပွီး
ကနျြရှိနသေော အခြိနျခဏလေးကို ကနျြးမာစှာဖွငျ့ရှငျးသနျး နထေိုငျကွရအောငျပါခငျဗြာ
ခံတွင်းက ရောဂါပိုးနှင့်အဆိပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆီနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်း၏ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
တန်ဖိုးထားရပါသောမိတ်ဆွေများအား မိမိတို့၏ခံတွင်းကို အုန်းဆီ နှမ်းဆီ သံလွင်ဆီတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ခန့် ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရရှိမည့်
ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ခံတွင်းက အာပုတ်ရည်များ အစာအိမ်သို့ မရောက်ရှိတော့ဘဲ အစာအိမ်ရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါကြောင်း ပြောပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တိုိ့ငယ်ငယ်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာ မြန်မာဆရာဝန်များနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံကပန်ချာဘီဆရာဝန်တွေပါ ဆေးရုံ ဆေးပေးခန်းတွေမှာ အများအပြားတွေ့ရှိရတတ်တာကို ကောင်းစွာ မှတ်မိနေပါသေးတယ်
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကနေ့ယနေ့တိုင်း ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးတာက ကျွန်တော့်အမေဒူးအရမ်းနာနေ၍ ပခုက္ကူမြို့ထင်းတန်းရပ်မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ပန်ချာဘီဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမာဒေးထံသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်
အမေ၏ဒူးတစ်ဘက်ကရောင်ကိုင်းနေပြီး လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်လို့ ဆေးခန်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအမေကို ဦးလေးတွေကချီမပြီးခေါ်သွားလေ့ရှိပါတယ်
ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမာဒေးမှအမေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးနောက် သွားတွေကောင်းရဲ့လားလို့မေးတော့ အမေမျက်နာအမူအရာက ဒူးနာတာနဲ့သွားကောင်းတာမကောင်းတာ ဆိုင်လို့လားဟုထင်နေဟန်တူပါတယ်
ဆရာဝန်ကြီးက ပါးစပ်ဟစမ်းဆိုတော့ အံသွားပေါက်တွေကိုတွေ့သွားပါတယ် အံသွားတွေကပြည်ပုပ်တွေဟာ ဒူးကိုရောက်သွားပြီး ဒူးနာတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်စေတာပါပဲ
ထိုသွားတွေကိုဖာထေးပြုပြင်လိုက်တော့ အမေဒူးနာလည်းကောင်းသွားတာကို လက်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါတယ်
ဆက်လက်၍ဒေါက်တာမာဒေးမှအမေအား နေ့စဉ် နှမ်းဆီ ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းဖြင့် ပလုတ်ကျင်းခိုင်းရာ အမေဒူးနာပြန်မဖြစ်တော့တာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သိုင်းရွိုက်ရောဂါဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပါပဲ သူ့ရဲ့သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကနေ ဟိုမုန်းအထွက်နဲတော့ လူကလေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လည်းတက်လာတယ်
ရုပ်ပါပြောင်းသွားလို့သူ့ကိုမမှတ်မိနိုင်ပါဘူး ခံတွင်းကဗက်တီးရီးယားနဲ့အဆိပ်တွေက သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့Pumpတွေကို blockလုပ္ထားလို့
ဟိုမုန်းကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့အတွက် သွားဆရာဝန်ဆီမှာ သေချာကုသလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ ပြန်ကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်
သူလည်းသံလွင်ဆီကို နေ့စဉ်ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာဖြင့် ဆယ်မိနစ်ခန့်ပလုတ်ကျင်းရာ ပြန်ပြီးရောဂါမဖြစ်တော့တာကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်
ထပ်မှန်၍ ကျောက်ကပ်ရောင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြဆွေးနွေးလိုပါသေးတယ်
သူ့မှာကျောက်ကပ်က ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့လူကဖောသွပ်သွပ်ဖြစ်လာပြီး မျက်ခွံပါမို့ပြီးရုပ်ပါပြောင်းသွားပါတယ်
ခြေထောက်တွေကလည်း ဖောပြီးရောင်ကိုင်းနေပါတော့တယ် ကျောက်ကပ်ဆေးတွေသောက်လည်း လူကသိပ်မသက်သာရှာပါဘူး တစ်နေ့ သူသွားအရမ်းနာနေလို့
သွားဆရာဝန်ကိုသွားရောက်ပြသတဲ့ အခါကြတော့မှ သွားဆရာဝန်တွေက သူ့ပါးစပ်ထဲမှာပျက်စီးနေတဲ့သွားနဲ့ သွားဖုံးတွေကိုပြန်ကောင်းအောင် ကုပေးလိုက်တော့မှ ကျောက်ကပ်လည်းပြန်ကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်
ကျွန်တော်နဲ့အရမ်းခင်မင်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ပါးစပ်တော်တော်နံတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ ဘယ်လောက်တောင်းနံသလည်းဆိုရင်
ပျင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်တွေကြာလာတော့ ခံတွင်းရောဂါခံစားလာရတာဖြစ်ပါတယ်
ခံတွင်းရောဂါတွေနဲ့သူငယ်ချင်းဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကလည်း သိပ်မကျန်းမာရှာတဲ့အတွက် အသက်(၄၅)နှစ်လောက်မှာဘဲ ဆုံးသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရဘူးပါတယ်
ယခုအချိန်အခါမှာလည်း ရာသီဥတုအစားအသောက် အပြုအမူအနေအထိုင်တွေကြောင့် လူတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့
ရောဂါဝေဒနာတွေကတော့ အသည်းရောဂါ အဆုတ်ရောဂါ အစာအိမ် ကျောက်ကပ် နှလုံး အူလမ်းကြောင်း၊ဆီးချိုနှလုံးသွေးကြော
ဦးနှောက်၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ကင်ဆာရောဂါမျိုးစုံ အရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ဟာ ခံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ဗက်တီးရီးယားရောဂါပိုးမွှားတွေကနေ
ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အဆိပ်တွေကြောင့် အများဆုံးဖြစ်နေကြတာကို အားလုံးသတိထားမိစေချင်ပါတယ်
ခံတွင်းမသန့်လေရောဂါထူလေဘဲဖြစ်ပြီး ပါးစပ်နံလေရောဂါများလေ အသက်တိုလေပဲဖြစ်ပါတယ်
သွားဖုံးအရင်းမှာ အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ရှိတဲ့ပြည်တွေထဲမှာ အလွန်အဆိပ်ပြင်းတဲ့ရောဂါပိုးတွေရှိပါတယ် ဒါကြောင့်ခံတွင်းထဲဗက်တီးရီးယားတွေကို အမြဲတန်းရှင်းလင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ခံတွင်းကရောဂါပိုးနဲ့အဆိပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ အုန်းဆီ နှမ်းဆီ သံလွင်ဆီတို့ဖြင် ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဆီကအဆိပ်စုပ်အားကောင်းပြီး သွားတွေအကြားနဲ့သွားဖုံးရင်းတွေမှာ အိမ်ဖွဲ့နေကြတဲ့အဏုဇီဝရောဂါပိုးတွေကို ဆီကဆွဲထုတ်ပေးနိုင်လိုဘဲဖြစ်ပါတယ်
နံနက်စောစောအိပ်ယာထတာနဲ့ ဆီတစ်ငုံစာကို၁၀မိနစ်လောက်ငုံထားပြီး ပလုတ်ကျင်းပေးပါက ရောဂါပိုးတွေထွက်သွားလိမ့်ပါမယ်
ထိုကဲ့သို့ဆီဖြင့်ပလုပ်ကျင်းပြီးမှ သွားတိုက်တာသည်အကောင်းဆုံးပါပဲ ပလုပ်ကျင်းပြီးရင်တော့ ရေနွေးနွေးလေးဖြင့်ပါစပ်ကို ပြန်လည်ဆေးကြောပေးရင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ
ပလုတ်ကျင်းဖို့အကောင်းဆုံးဆီကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ အုန်းဆီဘဲဖြစ်ပါတယ်
အုန်းဆီအပြင်သံလွင်ဆီ၊နှမ်းဆီတွေနဲ့လည်း ပလုတ်ကျင်းလို့လည်းရပါတယ် ပဲဆီ နေကြာဆီ စားအုန်းဆီတွေနဲ့တော့ ပလုတ်မကျင်းစေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်၏မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် ဆီဖြင့်ပလုပ်ကျင်းတာကို နေ့စဉ်မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ တစ်ပတ်ကို(၂)ခါ(၃)ခါလောက် လုပ်ပေးသင့်တယ်ဟုအကြံပေးလိုပါတယ်
ယခုအခါဆီနဲ့ပလုပ်ကျင်းပြီး ခံတွင်းသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ကာ ကျန်းမာနေထိုင်တဲ့နည်းကို နိုင်ငံတော်တော်များများအထူးသဖြင့် ထိုင်နိုင်ငံမှာလက်ခံကျင့်သုံးနေတာကို သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်၏မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် ခံတွင်းမသန့်လေ ကျန်းမာရေးထူလေဆိုတာကိုသတိပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၏ကျန်းမာရေးအတွက် ခံတွင်းကိုသန့်ရှင်အောင်ထားပြီး
ကျန်ရှိနေသော အချိန်ခဏလေးကို ကျန်းမာစွာဖြင့်ရှင်းသန်း နေထိုင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ
မုနျ့ဟငျးခါး ထဲ လူတိုငျးလိုလို ထညျ့စားတတျတဲ့ အကွျော ရဲ့ ကွောကျမကျဖှယျရာ
မွနျမာတှကွေိုကျလှတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါး မှာ ပါတဲ့ အကွျော ဘယျလောကျကွောကျဖို့ကောငျးလဲ
ဒီနေ့ မွောကျပွငျဘကျသှားရငျး မုနျ့ဟငျးခါးသညျမွငျတော့ ဗိုကျဆာတာနဲ့ ဝငျစားမိတယျ… အရမျးကွိုကျတာလဲ ပါတာပေါ့….
ဟယျ ကောငျးတယျ ကောငျးတယျဆိုပီး အကွျောပိုလေးနဲ့ ဟငျးရညျလေးတောငျ တောငျးသောကျလိုကျသေးတယျ….
အကွျောလေးကကောငျးလိုကျတာဆိုပီး အကွျော လေး ၂၀၀ဖိုး အပိုရောငျးပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ အရမျးကွိုကျပီး အထုတျကွီး တထုတျလောကျ ထပျရောငျးပေးပါ လို့ ဝယျရော….
အပိုမရှိတာမို့ ရောငျးပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယျတှကေလညျးကွိုကျမိရငျဇှတျဆိုတော့ ပိုကျဆံ ပေးခဲ့ပါမယျ နကျဖွနျမှ လာယူပါ့မယျပွောမိရော…(သူ့အကွျောကလညျး မှ ရှပွီး ကောငျးတာကို) ကိုယျပုံကွညျ့ပီး ဇှတျစားတော့မယျရိပျမိသှားတဲ့ ဆိုငျရှငျက ဘယျလိုစားမှာလညျးတဲ့ ….
အဲ့တော့မှ ပလပျစတဈထညျ့ကွျောတာနမှောဆိုပီး လနျ့သှားတာ.. အာ့နဲ့ စားလကျစ အကွျောထုတျလေး ဘေးခပြီး အိမျအမွနျပွနျပွေးပီး လကျထိုးအနျကွရရော….
ဗိုကျထဲရောကျသှားရငျ ဘယျလို ဖွဈသှားမလဲ သိခငျြစိတျနဲ့ ဖွဲ ရဲ ကွညျ့တော့ အလား လား အကွျောတှကေ ပလပျစတဈလိုလို ရာဘာ လိုလို ဖွူဖွူတှေ လကျနဲ့ ဖဈြလညျး မကွဘေူးနျော…
အမြားကွီး ရကျရှညျစားမယျဆို အူပိတျတာတို့ အူကငျဆာတို့ အစာအိမျကငျဆာတို့မြား ဖွဈမလားပဲ…
အဲဒါနဲ့ အကွျောထုတိ ကွီးယူပီး မီးဖိုပျေါတငျ ပွုတျကွညျ့ကွပွနျရော… အမလေးလေး ၁၀မိနဈလောကျ ပွုတျတာတောငျ ပုံစံ မပကျြတဲ့ ကိုရှအေကွျောတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွပါ…
လမျးပျေါမှာ ရောငိးနတေဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျတိုငျး ဒီအကွျောတှေ သုံးကွပါတယျ…
တနေ့ တနေ့ လူတှေ ဘယျလောကျတောငျ စားမိနလေဲ….
အစားအသောကျနဲ့ ပတျသတျရငျ ကိုယျတှအေိမျက ငွုပျသီးမှုနျ့ဆိုးဆေး အခြိုမုနျ့ ဆီ အတျောသတိထားကွပမေယျ့ လမျးဘေးမှာ ကိုယျကွိုကျတာလေးမွငျတော့လညျး မနနေိုငျမိတဲ့ အဖွဈ ကွောငိ့ အတျောလနျ့သှားမိတယျ….
လူတှေ လူတှေ တနေ့ တနေ့ ဘယျလောကျအဆိပျသငျ့နကွေပီလဲ
မြန်မာတွေကြိုက်လှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး မှာ ပါတဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ
ဒီနေ့ မြောက်ပြင်ဘက်သွားရင်း မုန့်ဟင်းခါးသည်မြင်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဝင်စားမိတယ်… အရမ်းကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့….
ဟယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုပီး အကြော်ပိုလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေးတောင် တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်….
အကြော်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုပီး အကြော် လေး ၂၀၀ဖိုး အပိုရောင်းပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ အရမ်းကြိုက်ပီး အထုတ်ကြီး တထုတ်လောက် ထပ်ရောင်းပေးပါ လို့ ဝယ်ရော….
အပိုမရှိတာမို့ ရောင်းပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယ်တွေကလည်းကြိုက်မိရင်ဇွတ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံ ပေးခဲ့ပါမယ် နက်ဖြန်မှ လာယူပါ့မယ်ပြောမိရော…(သူ့အကြော်ကလည်း မွ ရွပြီး ကောင်းတာကို) ကိုယ်ပုံကြည့်ပီး ဇွတ်စားတော့မယ်ရိပ်မိသွားတဲ့ ဆိုင်ရှင်က ဘယ်လိုစားမှာလည်းတဲ့ ….
အဲ့တော့မှ ပလပ်စတစ်ထည့်ကြော်တာနေမှာဆိုပီး လန့်သွားတာ.. အာ့နဲ့ စားလက်စ အကြော်ထုတ်လေး ဘေးချပီး အိမ်အမြန်ပြန်ပြေးပီး လက်ထိုးအန်ကြရရော….
ဗိုက်ထဲရောက်သွားရင် ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ သိချင်စိတ်နဲ့ ဖြဲ ရဲ ကြည့်တော့ အလား လား အကြော်တွေက ပလပ်စတစ်လိုလို ရာဘာ လိုလို ဖြူဖြူတွေ လက်နဲ့ ဖျစ်လည်း မကြေဘူးနော်…
အများကြီး ရက်ရှည်စားမယ်ဆို အူပိတ်တာတို့ အူကင်ဆာတို့ အစာအိမ်ကင်ဆာတို့များ ဖြစ်မလားပဲ…
အဲဒါနဲ့ အကြော်ထုတိ ကြီးယူပီး မီးဖိုပေါ်တင် ပြုတ်ကြည့်ကြပြန်ရော… အမလေးလေး ၁၀မိနစ်လောက် ပြုတ်တာတောင် ပုံစံ မပျက်တဲ့ ကိုရွေအကြော်တွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါ…
လမ်းပေါ်မှာ ရောငိးနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တိုင်း ဒီအကြော်တွေ သုံးကြပါတယ်…
တနေ့ တနေ့ လူတွေ ဘယ်လောက်တောင် စားမိနေလဲ….
အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကိုယ်တွေအိမ်က ငြုပ်သီးမှုန့်ဆိုးဆေး အချိုမုန့် ဆီ အတော်သတိထားကြပေမယ့် လမ်းဘေးမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးမြင်တော့လည်း မနေနိုင်မိတဲ့ အဖြစ် ကြောငိ့ အတော်လန့်သွားမိတယ်….
လူတွေ လူတွေ တနေ့ တနေ့ ဘယ်လောက်အဆိပ်သင့်နေကြပီလဲ
← Previous Page1 … Page456 Page457 Page458 … Page471 Next →